2013 ~ SAI SENG SERK
2:23 PMHEALTH No comments
စတော်ဘယ်ရီးသီးကို မကြိုက် တဲ့သူဆိုတာ တော်တော်ရှားမယ်ထင် ပါတယ်။ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ ပေါင်မုန့် ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘီစကစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အအေးပဲဖြစ်ဖြစ် စတော်ဘယ်ရီအရ သာဆိုတာ ပါဝင်နေပါတယ်။ အနီရောင်ရှိပြီးမွှေးပျံ့တဲ့အနံ့ရှိတဲ့ စတော်ဘယ် ရီသီးဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် သင့် တော်တဲ့သစ်သီးတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါ တယ်။
၁။ စတော်ဘယ်ရီမှာပါတဲ့ ပေါ် လီ ဖီနော်ဟာ ရောင်ရမ်းမှုအမျိုးမျိုးကို သက်သာစေပါတယ်။
၂။ စတော်ဘယ်ရီမှာ ရောင်ရမ်း မှုသက်သာစေတဲ့ anti inflammatory နဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ပူးတွဲပါဝင်မှုများတဲ့အတွက် ကင်ဆာ ကိုကာကွယ်စေပါတယ်။ အထူးသ ဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင် ဆာတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ အခုသုတေသနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
၃။စတော်ဘယ်ရီသီးဟာ အသက် အရွယ်ရလာရင်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိမှုန် ခြင်း၊ မျက်စိတိမ်စွဲခြင်းတွေကို လျော့ ပါးစေတဲ့ စူပါအစားအစာ ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ်။
၄။ စတော်ဘယ်ရီသီးဟာ ခုခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အိပ် ရေးပျက်ထားသူတွေ စတော်ဘယ်ရီ ဖျော်ရည် အေးအေးတစ်ခွက်သောက် သုံး ပေးသင့်ပါတယ်။
၅။စတော်ဘယ်ရီသီးဟာ ဗီတာ မင်စီကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတဲ့အတွက် အရေပြားတင်းရင်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ ကော်လဂျင်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်း၊သွားဖုံးသွေးယိုခြင်းကို ကာကွယ်ပေး နိုင်ခြင်းတွေကို စားသုံးသူတွေ ခံစား ရစေပါတယ်။
2:20 PMHEALTH No comments
2:18 PMHEALTH No comments
ချစ်သူကိုနမ်းခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာ ကိုရော သိပါသလား။သင့်မှာ ချစ်သူရှိပါသလား။ နောက်ပြီး ချစ်သူကိုရော မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းခဲ့ဖူးပါသလား။ ပြီးတော့ ချစ်သူကိုနမ်းခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာ ကိုရော သိပါသလား။ ကဲ … စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်မှာရေးထားတဲ့ အနမ်းနဲ့ ကျန်းမာရေး ဘယ်နည်းဘယ်ပုံ ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာကို ဆက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နမ်းတယ်ဆိုတာ ခံစားချက်အရရော၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေအရပါ ချစ်ခင်နှစ်လိုခြင်းဆိုတဲ့ သက်ရောက်မှုကို ဖွင့်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို နမ်းပြီဆိုရင် နမ်းတဲ့လူက အနမ်းခံရတဲ့သူကို ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲပေါ့။ ကဲ … ဒါဆို အနမ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Definitionလေးတစ်ခုလောက် ထုတ်ကြည့်ရအောင်။
သင်ကရော ဘယ်လိုမျိုး ဖွင့်ဆိုမှာလဲ။ အနောက်တိုင်းယုံကြည်မှုအရတော့ နမ်းတယ်ဆိုတာ “နှစ်လိုဖွယ် ခံစားဆက်ယှက်မှုကို ပါးစပ်ကမပြောဘဲ နှုတ်ခမ်းချင်း ထိတွေ့ပူးကပ်ပြီး ဖော်ပြတဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတ” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းရှုံ့ကြတဲ့
စုံတွဲတွေတိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်(၇)ခုကို အလိုလိုရရှိနိုင်တယ်တဲ့။ အဲဒီ(၇)ချက်က ဘာတွေလဲဆိုတော့ …
၁။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နမ်းနေကြတဲ့အခါ ချစ်သူစုံတွဲ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ သွေးကြောတွေဟာ ပြန့်ကားသွားပြီး သွေးခုန်နှုန်းကိုလည်း မြန်လာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွေးကြောတွေထဲမှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အဆီတွေကိုချေဖျက်ပစ်ပြီး သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ကိုလက်စထရော ပမာဏကိုလည်း ကျဆင်းစေပါတယ်။
၂။ နမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ စုံတွဲနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားမျှင် အခု(၃၀)လောက်ကို လှုပ်ရှားလာအောင် ဦးနှောက်က လှုံ့ဆော်ပေးပါသတဲ့။ ဒါကြောင့်လဲ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အရေပြားတွေမှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားသန့်စင်စေပြီး မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ပိုမိုချောမွေ့လာစေပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ ယှက်ဖြာနေတဲ့ ဆံချည်မျှင် သွေးလွှတ်ကြောတွေရဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုကို ပိုပြီးကောင်းလာစေပါတယ်။
၃။ နောက်တစ်ခုကတော့ ၀တဲ့သူတွေ စိတ်ဝင်စားမယ့် ကိစ္စပါပဲ။ (၅)စက္ကန့်ကြာအောင် တစ်ခါနမ်းတိုင်း ကိုယ်တွင်းမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ အဆီပမာဏ (၁၂)ကီလိုရီ လောင်ကျွမ်းစေတယ်ဆိုပဲ။ ဒါကြောင့် ၀ိတ်ကျချင်ရင် ရည်းစားကို များများနမ်းကြပါ။
၄။ နောက်တစ်ခုကတော့ စိတ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ နမ်းခြင်းဟာ စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဖိစီးမှုတွေ၊ အားငယ်မှုတွေကို ချေဖျက်ပေးပြီး စိတ်ခွန်အား နိမ့်ကျခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဟိုမုန်းဓာတ်တစ်မျိုး ဦးနှောက်က ထုတ်ပေးတာကိုလည်း တားဆီးပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သူတွေတောင် ချစ်သူရဲ့အနမ်းကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြီးမြတ်ဆုံး သူရဲကောင်းကြီးတွေလို့ ထင်မှတ်လာတတ်တယ်လို့ သုတေသီတွေက အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်သူရဲ့အနမ်းဟာ အကောင်းဆုံးသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးတစ်ခုပါပဲ။
၅။ ပြီးတော့ အနမ်းဆိုတာ သဘာဝ ရောဂါကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးပါပဲတဲ့။ ဆေးပညာ သဘောအရ လူတစ်ဦးဆီမှာရှိနေတတ်ကြတဲ့ သဘာဝကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေဟာ မတူညီကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူနှစ်ဦး နမ်းကြတဲ့အခါ သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ခံပဋိဇီဝ စွမ်းအားတွေဟာ တံတွေးကနေတဆင့် ပေါင်းစပ်သွားပါတယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် ကိုယ့်ချစ်သူမှာရှိပြီး ကိုယ့်ဆီမှာမရှိတဲ့ ရောဂါကာကွယ်မှု စွမ်းအင်တွေ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပေါင်းစပ်ရောက်ရှိလာနိုင်ခြေဟာ ရာခိုင်နှုန်း(၈၀)ထိ ရှိတယ်ဆိုပဲ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို “အနမ်းဖြင့် ရောဂါကာကွယ်နည်း”လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေက နာမည်ပေးထားပါတယ်။
၆။ နောက်ပြီး အနမ်းဟာ လူရဲ့ဦးနှောက် စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်လာအောင် စနစ်တကျ နှိုးဆွပေးပါတယ်။ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ သိသာလဲဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူကို ပထမဆုံးအကြိမ် နမ်းဖူးတဲ့အခါ ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့ ရှိန်းကနဲ၊ ဖိန်းကနဲ ခံစားမှုမျိုးမှာ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဦးနှောက်အရည်အသွေးဟာ ထိပ်ဆုံးအဆင့်ထိ တက်နေပြီးတော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကလည်း အမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၇။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ စမ်းကြည့်ပြီးမှ ယုံပါတော့။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ … ချစ်သူကိုနမ်းရတာ ရင်ခုန်ကြည်နူးစရာ ကောင်းတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး ပျော်စရာလဲ ကောင်းပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုလဲ။
2:14 PMHEALTH No comments
သွေးတိုးတာကြောင့် လေဖြတ်ဝေဒနာ ဒါမှမဟုတ် နှလုံးရောဂါထတဲ့ ဝေဒနာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ၂-၄ဆ မြင့် တက်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သွေးတိုးရောဂါရှိသူ သုံးပုံတစ်ပုံကသာ သွေးဖိအားကို စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်မှုရှိ ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်မှု နည်းတဲ့အတွက် သွေး ဖိအားအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတဲ့အချက်တွေကို သတိမမူမိတတ်ပါဘူး။
အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ တစ်နေ့ အရက်နှစ်ပက်ထက် ကျော်ပြီး သောက်တာကြောင့် သွေးဖိအားမြင့်တက် နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
♦ လုပ်ဆောင်ပါ ♦
အမေရိကန်နှလုံးကျန်းမာရေးဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်ထဲမှာပါတဲ့ အင်တီ
အောက်ဆီးဒင့် လိုင်ကိုပင်းဟာ သွေးတိုးနေသူတွေမှာ သွေးဖိအား လျော့ကျအောင် ထိန်းပေးနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ် ပါဝင်မှုများတဲ့တရုတ်နံနံပင်ကလည်း သွေးဖိအားကျအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ တယ်။
♦ ရှောင်ပါ ♦
အစာမရှိဘဲ အရက်ကို လုံးဝမသောက်ပါနဲ့။ အရက်ကို ရှောင်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မရှောင်နိုင်ရင် တစ်ခုခုစားပြီးမှ တစ်နေ့နှစ်ပက်ပဲသောက်ပါ။
(၂) လှုပ်ရှားမှု မရှိခြင်း
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကြောင့်သွေးတိုးနေသူတွေမှာ သွေးဖိအား ၁ဝမှတ်အထိ လျော့ကျနိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းပြီးသွေးကြောတွေ လွယ်လင့်တကူ ချုံနိုင်၊ ချဲ့နိုင် စွမ်းရှိကာ သွေးတိုးတာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရော်ဘာဘောလုံးတစ်လုံးကို ကိုင်ပြီး လက်နဲ့ ဆုပ်ညှစ်ပေးပါ။ အကျိုးကျေးဇူးအများကြီး ရှိပါတယ်။ လေ့ လာမှုတစ်ရပ်အရ ရှစ်ပတ်ကြာ လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူတွေဟာ အပေါ်သွေးဖိအား ၁၅ မှတ်နဲ့
အောက်သွေးဖိအားငါးမှတ် လျော့ကျမှုရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှု မရှိဘဲ အထိုင်များတဲ့ အကျင့်ကို ရှောင်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းအလွန်အမင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် မလုပ်သင့်ပါဘူး။
(၃) ခါးတစ်ဝိုက် အဆီပိုများ
သင် သွယ်လျနေစဉ်မှာ နှလုံးနဲ့သွေးကြောစနစ်တွေက ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရုံနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ ဗိုက်ပူလာ တဲ့အခါ သွေးထောက်ပံ့မှုပိုလိုအပ်လာတာကြောင့် နှလုံးအပေါ် အပိုဝန်သက်ရောက်စေပြီး သွေးဖိအားတိုး လာပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပုံမှန်အတိုင်းထိန်းနိုင်ပြီး ဝမ်းဗိုက်ချပ်ရပ်နေရင် သွေးဖိအားက ၁ဝ- ၂၉ မှတ်အထိ လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
အဆီနည်း အသားစားပါ။ သြစတြေးလျလေ့လာမှုတစ်ခုအရ သွေးတိုးနေသူတွေကို တစ်နေ့တာ စားသမျှ ရဲ့ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းအား ပေါင်မုန့်၊ အာလူး၊ ခေါက်ဆွဲအစား အဆီနည်းအသားကိုအစားထိုးစားစေခဲ့ရာ ရှစ်ပတ် အကြာမှာအပေါ်သွေးဖိအား ၄ မှတ်အထိ လျော့ကျမှုရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆီအအိမ့်များတဲ့ အစာတွေကိုရှောင်ပြီး ကောင်းတဲ့ အဆီကို စားပါ။ နှမ်းဆီမှာ ပိုလီမပြည့်ဝဆီနဲ့ စီစမင်
ဒြပ်တစ်မျိုး ပါဝင်တာကြောင့် အသည်းရဲ့ကိုလက်စထရောပြုလုပ်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆားဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရေဆွဲယူမှုဖြစ်စေပြီး သွေးထုထည်မြင့်တက်ကာသွေးတိုးစေပါတယ်။ ဆားများ များစားလေ၊ အသက်ပိုတိုလေဖြစ်တာကြောင့်ဆားကို လျှော့စားသင့်ပါတယ်။
ဟင်းချက်တဲ့အခါ ဆား အစားထိုးအရာတွေကို ထည့်ပါ။ ပုံမှန် ဆားကိုပိုတက်စီယမ်ဆား၊ ဆားခါးတို့နဲ့ ရော
ပြီးသုံးတာကြောင့် သွေးဖိအားကို ခြောက်မှတ်ခန့် လျော့ကျစေတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
ပြုလုပ်နည်းကတော့ ရိုးရိုးဆား ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ပိုတက်စီယမ်ဆား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဆားခါး ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း တို့ကို ရောမွှေပြီး သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ပြီးသား ဟင်းလျာတွေထဲ ဆားခတ်တဲ့အကျင့်ကို ပြင်ပါ။ ဆားကဲတဲ့အဆင်သင့်အစာတွေကို တတ်နိုင် သမျှလျှော့စားပါ။
စိတ်ဖိစီးကို တုံ့ပြန်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အဒရီနယ်လင်ထွက်ရှိမှုများစေပြီး ရုတ်တရက် သွေးတိုးစေပါ တယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ အိမ်သန့်ရှင်းရေးကို နှစ်ရက်ခန့်လုပ်ထားသူတွေကို သွေး
ပေါင်ချိန်ကြည့်ရာ သွေးဖိအားထိန်းနိုင်တဲ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို မကြာခဏ မတွေးပါနဲ့။
သွေးတိုးရောဂါ မျိုးရိုးရှိရင် သွေးဖိအားထိန်းနိုင်မယ့် နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို လိုက်နာရပါမယ်။
သွေးတိုးရောဂါဖြစ်မလာအောင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူကာ ကာကွယ်ပါ။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကိုကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် မသောက်ပါနဲ့။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပုံမှန်အကိုက် အခဲပျောက်ဆေး မှီဝဲတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာသွေးဖိအားမြင့်တက်နိုင်ခြေ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရပါ တယ်။
2:12 PMHEALTH No comments
Myanmar Forward စာဖတ်ပရိသတ် အတွက် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာမေး၊ဖြေများ အကြောင်းကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ကွန်ပျူတာ အကြည့်များပြီး အကြောတက်ရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ ဆရာ။
ဖြေ ။ ။ မျက်စိ အနားပေးပါ၊ မိနစ် အနည်းငယ်ကြာ မျက်စိကို ပိတ်(မှိတ်)ထားပါ။ လည်ပင်းနဲ့ ခေါင်းကို မိနစ် အနည်းငယ်ကြာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါ။ သွေးပူ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာဟာ အကြောတက် တာကို သက်သာ စေပါတယ်။
မေး ။ ။ ခြေထိပ်၊ လက်ထိပ် ကျဉ်လာရင် ဘာလုပ် ရမလဲဆရာ။
ဖြေ ။ ။ ခြေထိပ်၊ လက်ထိပ်ကျဉ်တာ ရောဂါအခံ ရှိသူကလွဲပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတာက အာရုံကြော အားနည်းလို့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘီဝမ်းဓာတ် ချို့တဲ့လာရင် ထုံ၊ ကျဉ်၊ ကြွက်တက် တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေနဲ့ ကလေးမွေးပြီးစ မိခင်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ ရှိတယ်။ အရက် သောက်သုံးသူ တွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီလို လက္ခဏာတွေ ပြရင် ဘီဝမ်း ချို့တဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ ကယ်လ်စီယမ် ဘီဝမ်းဓာတ်ပါတဲ့ ပဲပင်ပေါက်၊ ပဲပြား၊ အုန်းစိမ်းရည်၊ဆန်လုံးညို စတဲ့ အစားအစာတွေ စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
မေး ။ ။ လိပ်ခေါင်းကြောင့် သွေးထွက်များရင် ဘာလုပ် သင့်သလဲဆရာ။
ဖြေ ။ ။ ဝမ်းချုပ်တာများပြီး၊ လိပ်ခေါင်း ထွက်ရာကနေ ပိုဆိုးပြီး သွေးပါ လာရင် သတိထားသင့်ပြီ။ လိပ်ခေါင်းသွေး ပါလာပြီဆိုရင် သွေးအား နည်းတာပါ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေဆိုရင် မူးဝေတာပါ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် လိပ်ခေါင်းရှိသူတွေ ဝမ်းချုပ်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်သင့်တယ်။ အရက်၊ ဘီယာ သောက်တာများရင် နဂိုလိပ်ခေါင်း ရှိသူတွေမှာ ရုတ်တရက် ဝမ်းသွားရင် သွေးပါ ပါလာတတ်တယ်။ အခုလို မဖြစ်အောင် အရက် အလွန်အကျွံ သောက်တာ ရှောင်သင့်တယ်။ ဒါ့အပြင် ဝမ်းပျော့ စေမယ့် အစာစားပြီး ရေအိမ်ထဲမှာ ကြာကြာထိုင်တာကို ရှောင်သင့်တယ်။
မေး ။ ။ ရောဂါအခံ ရှိသူတွေ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် မပါဘဲ ကိုယ်ဝန်တား ဆေး မသောက်သင့်တာ ဘာကြောင့်လဲ။
ဖြေ ။ ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါအခံ ရှိသူ၊ အသည်းရောဂါဖြစ်သူ အဲဒီလို လူမျိုးတွေဟာ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက် မပါဘဲ တား ဆေးမသောက်သင့်ဘူး။ တားဆေးတွေကြောင့် သွေးပြန်ကြော ပိတ်တာ၊ သွေးခဲတာတွေ ဖြစ်တတ် သလို နှလုံး သွေးကြော ကျဉ်း ရောဂါ နဲ့ နှလုံးသွေးကြောပိတ် ရောဂါလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ တားဆေးကို နှစ်ရှည်လများ သောက်ရင်လည်း အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်။ ရေရှည် သောက်နေရင် ကင်ဆာ အလုံးအကျိတ်တွေ ထွက်လာ တာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတွေ တားဆေးကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အပြင်ဆေးဆိုင် ကနေ ဝယ် သောက်တာမျိုး မလုပ်ဘဲ၊ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်ထံ မိမိဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါ အကြောင်းကို တိုင်ပင်ပြီး သုံးသင့်တယ်။
မေး ။ ။ မိုးရာသီမှာ ပင်လယ်စာ ဘာလို့ သတိထား စားသုံး သင့်သလဲ ဆရာ။
ဖြေ ။ ။ မိုးရာသီမှာ ပင်လယ်စာ အစားများရင် အသက်ကြီးပိုင်းနဲ့ ကလေး တွေ အစာ အဆိပ်သင့်သလိုမျိုး ခံစားရတယ်။ ပူလိုက်၊ အေးလိုက်၊ ခြောက်လိုက်၊ စိုလိုက်နဲ့ အစာအိမ်က ချက်အားမကောင်းလို့ ဗိုက်နာ၊ မူးဝေ၊ အော့အန်၊ ဝမ်းသွား၊ ဝမ်းလျှောတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ မကျက်တကျက် ချက်ပြုတ် စားသောက်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် ရက်လွန်ပြီး မသန့်တဲ့ ပစ္စည်း (သိုးနေတာမျိုး) ဝယ်ယူ စားသုံးမိရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရာသီဥတုနဲ့ ကိုက်ညီ တဲ့ အစားအသောက် တွေကို ရွေးပြီး စားသင့်တယ်။
မေး ။ ။ လူနေရပ်ကွက်ထဲ ဆေးခန်းဖွင့်ရင် ဘာတွေ ဆင်ခြင်သင့်သလဲ ဆရာ။
ဖြေ ။ ။ လူနေများတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲ ဆေးခန်းဖွင့်ရင် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်း မှုရှိရမယ်။ အကြော်ဆိုင်၊ ထမင်းဆိုင်၊ အရက်၊ ဘီယာဆိုင်တွေနဲ့ ဝေးရမယ့်အပြင် လေကောင်းလေသန့် ရသင့်တယ်။ ရှိသင့် ရှိထိုက်တဲ့ အကျယ်အဝန်းမှာ လေဝင်လေထွက် ကောင်းကောင်း၊ အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း ရှိရမယ်။ ဆေးခန်းသုံး ဆေးထိုးပြွန်နဲ့ အပ်၊ လူနာအတွက် သုံးပြီးဖြစ်တဲ့ ဂွမ်း၊ ပတ်တီး၊ အနာက အညစ်အကြေး တွေကို သီးသန့် အမှိုက်ပုံး ထားပြီး မြေမြှုပ်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရမယ်။ အမှိုက်ပုံး တွေကိုလည်း အမြဲ သန့်ရှင်း နေစေရမယ်။ ။
2:07 PMHEALTH No comments
သိပ္ပံပညာရဲ့ လတ်တလော လေ့လာမှုတွေအရ လူတွေဟာ ရေနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ဓာတ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အာရုံကြောတွေ အပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိသွားပြီး စိတ်ဖိစီး မှု လျော့ကျတာ၊ စိတ်ခံစားမှု ကောင်း မွန်တာ နဲ့ စိတ်တို ဒေါသထွက် မှု လျော့ပါးတာ အစရှိတဲ့ အကျိုး အာနိသင်တွေကို ရရှိစေတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
ရေကူးတာက အပြေးသမားတွေမှာလိုပဲ အဆစ်တွေအပေါ် ဒဏ်သက်ရောက်မှု မရှိဘဲ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေတဲ့ အန်ဒေါ်ဖင်ဟော်မုန်း ထွက်ရှိစေပါတယ်။ ရေကူးကန်ထဲမှာ လှေလှော်တာကတောင် စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အင်ဒီးယားနား တက္ကသိုလ်ရဲ့ ပါမောက္ခဂျက်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် အားကစား မလုပ်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ရေကူးတာက အန်ဒေါ်ဖင်ဟော်မှုန်း ထွက် လာစေပြီး စိတ်ကြည်နူး နှစ်သိမ့်မှုကို ခံစားရစေကြောင်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ ရေကန်ထဲမှာ ကလေးတွေ နဲ့အတူ ကစားရင်း ကလေးတွေကို ရေပက်ဖျန်း ပေးတာကလည်း နာဗ့်ကြောစနစ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါတယ်။ တကယ်လို့ ရေကူးကန်ကို မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင် ရေစိမ်ကန်ထဲမှာ စိမ်ချိုးတာ ကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ပါးစေပါတယ်။
ရေချိုးတာက စိတ်နဲ့ခန္ဓာကို လန်းဆန်းသွားစေတယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ လတ်တလော လေ့လာမှုအရ ရေရဲ့အပူချိန်က အေးချင်အေး၊ နွေးချင်နွေး နေပါစေ၊ ရေထဲကို စိမ်ချိုးတာက ကျန်းမာနေ တဲ့ လူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရေစိမ်ချိုးချိန် ၂၄ မိနစ် ကြာပြီး ချိန် မှာ လူရဲ့ဗဟိုအာရုံကြော စနစ်ဟာ အနားရကာ အာရုံစူးစိုက်အား ပိုကောင်းလာပါတယ်။ စိတ်ဓာတ် ကျတာနဲ့ ပူပင်သောက ဟူသမျှကိုလည်း လျော့သွားစေ ပါတယ်။ ခြေထောက် ကို ရေစိမ်တာ ကလည်း ညမှာ ကောင်းကောင်း အိပ်မောကျစေပါတယ်။ Physiology Anthropology ရဲ့ လေ့လာမှုအရ ဒူးအထိ ခြေထောက်တွေကို မိနစ် ၂၀ လောက် ကြက်သီးနွေးရေထဲ စိမ်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် ရေချိုးတဲ့ သူတွေကကောင်းကောင်းအိပ်မောကျစေပြီးမလုပ်တဲ့သူတွေထက်အိပ်စက်မှုအရည်အသွေး လည်း ကောင်း မွန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကြက်သီးနွေးရေထဲ စိမ်ဖို့ အချိန် မပေးနိုင် ရင်တောင် ခြေချင်းဝတ်တွေပေါ်ကို ကြက်သီးနွေးရေ လောင်းချပေးပါ။ အချိန် ၃၀ စက္ကန့်လောက် လုပ်ပေးရုံ နဲ့ အ ပန်းပြေမှုကို ခံစားရမှာပါ။
ရေကိုနည်းနည်းပဲ သောက်တာက စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် မကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှု ကို ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။ ရေဆာနေပြီဆိုရင် ရေဓာတ် ခန်းခြောက်တဲ့ အဆင့် ကို ရောက်နေ ပါပြီ။ ရေဓာတ် ခန်းခြောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ပိုပြီး ပင်ပန်းလာတယ်။ အာရုံစူးစိုက်ဖို့ ပိုခက်လာပါ တယ်။ ၂၀၀၁ လေ့လာမှု တစ်ရပ်အရ ညဉ့်လယ်မှ နံနက် ၁၁ နာရီအထိ ရေနဲ့အစာ လုံးဝမကျွေးဘဲ ထားတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိုးဆော်နိုင်တဲ့ တက်ကြွဖျတ်လတ်မှု ပျောက်ဆုံး သွားတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ ရေ မသောက် ဘဲ အချိန် ၁၃ နာရီလောက် ကြာသွားရင် အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့ တက်ကြွမှု တို့ လျော့ ကျ သွားပြီး ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ သင် ဘယ်လောက် ရေသောက် သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက် က သင့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်၊ လှုပ်ရှားမှုအ ဆင့်၊ လေရဲ့ အပူချိန်နဲ့ စိုထိုင်းဆတို့အပေါ် မူတည်နေ ပါတယ်။ အစာစားပြီး တိုင်း ရေတစ် ဖန်ခွက် သောက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ခင်နဲ့ လုပ်ပြီးချိန်မှာ လည်း ရေတစ်ဖန် ခွက်စီ သောက်ပေး ပါ လို့ ဒေါက်တာဘော်ဒလေက အကြံပြုထားပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းအောင် ပက်ဖျန်းရတဲ့ စပရေးကို လိုချင်ရင် ရေတံခွန်ဆီကို သွားပါ။ ရေတံခွန်ရဲ့ အခြေရှိ လေထဲမှာ စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေတဲ့ မော်လီကျူး အမှုန်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဝက်စ်လီ ရန် တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုအရ ၁၅-၃၀ မိနစ်လောက် ရေနဲ့ပက်ဖျန်း ပေးတာက စိတ်ဓာတ် ကျတာ ကို သက်သာစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ဦးနှောက်ထဲမှာ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေတဲ့ ဆီရိုတိုနင် ပမာဏကို တိုးစေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ရေတံခွန်နားကို သွားတဲ့အခါ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းရှူ သွင်း လုပ်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ရေပန်းနဲ့ ရေချိုးလိုက်ပါ။ ငါးမိနစ်လောက် ရေပန်းနဲ့ ရေချိုးပေးတာက ပူပင်သောကတွေကို သိသိသာသာ လျော့ကျသွားစေ တယ်လို့ လေ့လာသူတွေ က ဆိုပါတယ်။
ကမ်းခြေမှာ နေတဲ့ရက်တွေမှာ သွေးဖိအားတွေ တည်ငြိမ်နေတယ်လို့ မထင်ဘူးလား။ ရေသံက စိတ် ကို အေးချမ်း တည်ငြိမ်စေပါတယ်။ အလာဘားမား ဆေးရုံသုတေသီတွေက ပင်လယ်ရေသံဟာ ကြားရသူ လူနာတွေကို သုံးညခန့် ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပင်လယ်ရေလှိုင်းသံနဲ့ လှိုင်းပုတ်သံတွေဟာ စိတ်ကို အေးချမ်းစေတာကြောင့်ပါ။ ဦးနှောက်ဟာ လှိုင်းသံ၊ ရေသံတွေအပေါ် ကောင်းတဲ့ တုံ့ပြန်မှု ပေးနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref:By Good Health Originally
2:05 PMHEALTH No comments
လည်ချောင်းနာချိန် သက်သာစေရန် လုပ်ဆောင် နည်းများအခုလို အအေးမိ တုပ်ကွေးဖြစ်သူ များပြားချိန်မှာ လည်ချောင်းနာတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေ အများအပြား ရှိကြပါတယ်။ လည် ချောင်းနာနေချိန်မှာ ပူစပ်ပူလောင် ခံစားရသလို အစာတစ်ခုခု မျိုလိုက်တိုင်း လည်ချောင်း နာကျင်နေတတ် ပါတယ်။ လည်ချောင်း နာတာက အများအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင် တာကြောင့် ဖြစ်တတ် ပြီး အများအားဖြင့် စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ ခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာကို အောက်ပါနည်းတွေနဲ့ ကုသပါ။
1:33 PMSHANHISTORY No comments
ရှေး ရှမ်းစော်ဘွား တွေရဲ. နန်းစဉ် ရတနာတပါးလို.ဘဲ အကြမ်းဖျင်းသိရပါတယ်
ဒီလက်စွပ်ရဲ. စော်ဘွားနွယ်ဝင်နောက်ဆုံးပိုင်ရှင်ဟာ လက်စွပ်ကို ထာဝရ ရဲ.လက်ထဲကို ရှမ်းတို.ရိုးရာကတော.ပွဲအစုံနဲ.
အပ်နှံပြီး အမေရိကားကိုထွက်သွားတဲ.အချိန်ကစလို. အခုအချိန်ထိ အဆက်သွယ်မရတော.ပါဘူး
သူကြီးခင်ဗျား ရှေးနန်းစဉ် ရတနာ တပါးမို. သူ.ရဲရာဇ၀င်ကိုလဲသိနိင်တဲ.လူများ ရွာထဲမှာရှိခဲ.ရင်
ဒါမှမဟုတ် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသူတွေထဲကပညာရှင်တွေများသိခဲ.ရင် ဖေါ်ထုတ်ပေးနိင်အောင်
ဒီန၀ရတ်လက်စွပ်ဟာ ဘေးတဖက်တချက်မှာ ကဒေါင်းကနေတဲ.ပုံကိုအနုစိတ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်
လက်စွပ်တဲ.ဘက်၂ဘက်မှာတော. ခြင်္သေ. ကို နဂါး၂ကောင် ခြံရံထားတဲ.ပုံ ကိုအနုစိတ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးပိုင်ရှင်ရဲ. ပြောပြချက်အရ ရှေးရှမ်းတော်ဝင်စော်ဘွားတွေ တရားစီရင်ရာ နဲ.မင်္ဂလာအခမ်းနားတွေမှာ
ရှမ်းစော်ဘွား အဆက်ဆက် ကိုးကွယ်လာခဲ့သော ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်တွင် ရုပ်ပွားတော်ပေါင်း ၁၀၀၀ ပါသော ရှေးဟောင်း ရုပ်ပွားတော်
1:23 PMSHANHISTORY No comments
1:05 PMSHANHISTORY No comments
ရှမ်းပြည်နယ်သည် ၆၀၁၅၅ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပြီး တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၁၄ ခုအနက် ဧရိယာအားဖြင့် အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ အကြမ်းအားဖြင့် တြိဂံပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီး ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟူ၍ ခွဲခြားပြောဆိုလေ့ရှိကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့ပိုင်းတွင်တည်ရှိတည်ရှိပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည်။
တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်၍၊ ချမ်းအေးသော ရာသီဥတုရှိသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်သည်‌၏ မြို့တော်မှာ တောင်ကြီးမြို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရလက်ထပ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်ကို မြောက်ပိုင်း၊တောင်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း ဟု စစ်တိုင်းဌာနချုပ်များရှိသည့် အတိုင်း ခွဲခြားလိုက်ပြီး မြောက်ပိုင်း၏ မြို့တော်အဖြစ် လားရှိုးမြို့ ၊ အရှေ့ပိုင်း၏မြို့တော်အဖြစ် ကျိုင်းတုံမြို့နှင့် တောင်ပိုင်း၏ မြို့တော်အဖြစ် လက်ရှိမြို့တော် တောင်ကြီးမြို့ အဖြစ် အသီးသီ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် တရားဝင်အားဖြင့် မြို့တော်မှာ တောင်ကြီးမြို့သာဖြစ်သည်။
ရှမ်း၊ ဓနု၊ အင်းသား၊ ပအိုဝ့်၊ ပဒေါင်၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်၊ ၀ ၊ ကချင် ၊ ဗမာ ၊ အခါ၊ လားဟူ၊ လီဆူး နှင့် လီရှော​
ကျိုင်းတုံ အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည် မြို့တော်
လားရှိုးမြို့ မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည် မြို့တော်
Kalaw Hill Station
ရှမ်းပြည်နယ်သည် ရှမ်းလူမျိုးများသာမက အခြားတိုင်းရင်းသားများ၊တရုတ်၊ကုလား ပါရောနှောနေထိုင်သည့်အတွက် ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတန်းများ များပြားသည်။သို့သော် တိုင်းရင်းသားအများစု မှာရှမ်းစကားကိုအသုံးပြုကာ ဆက်ဆံလေ့ရှိသည်။
အဓိကအားဖြင့် သစ်၊လက်ဖက် နှင့် ရာဘာ အပါအ၀င် သီးနှံများဖြစ်သော ပန်းသီး၊စပျစ်သီး၊လိမ္မော်သီး နှင့် အခြားလူကြိုက်များသည့်သီးနှံများလည်းထွက်ရှိသည်။
နမ္မတူ သတ္တုတွင်းမှ ဘော်၊ခဲ၊ရွှေ နှင့် အခြားဓါတ်သတ္တုအနည်းငယ်တို့ထွက်ရှိသည်။တီကျစ် ကျောက်မီးသွေးတွင်းမှ ကျောက်မီးသွေးများထုတ်လုပ်ပြီး တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံကို လောင်စာကုန်ကြမ်း ထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။အထူးထင်ရှားသည့် မြန်မာ့ပတ္တမြား၊နီလာနှင့် ကျောက်မျက် ရတနာများကို မိုင်းရှူး နှင့် နမ့်ယားဆိမ့် ဒေသများမှ တူးဖော်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
12:53 PMSHANHISTORY No comments
12:20 PMSHANHISTORY No comments
သံလွင်မြစ်ဟာ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ အကြီးဆုံးမြစ်ဖြစ်သည့်အပြင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရေစီးအသန်ဆုံးမြစ်၊ အလှပဆုံးမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အနုပညာရှင်များကတော့ သံလွင်မြစ် ကို အကြောင်းပြုပြီး တေးသီချင်းတွေ ရေးဖွဲ့သီကုံးကြတယ်။ ရွှေလီမြစ်၊ နမ့်တိန်းမြစ်တို့ကို ရှမ်းသီချင်းရေးဆရာတွေက အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသာ ရေးစပ်ကြသော် လည်း သံလွင်မြစ်ကိုတော့ အမျိုးသားရေးသီချင်းအဖြစ် ရေးဖွဲ့ကြတယ်။ ရှမ်းသီချင်းတစ် ပုဒ်က (ဘယ်သူကမှ သူ့အကြောင်းကို မသိကြဘူး)လို့ဆိုထားတာကြောင့် စာရေးသူက သံလွင်မြစ်အကြောင်း ရေးဖွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။
သံလွင်မြစ်ဟာ တိဗက်ပြည်အရှေ့ဘက် ဒန်ကလာ ရေခဲတောင်ကနေ မြစ်ဖျားခံခဲ့ပြီး အနောက်ကနေ အရှေ့ဘက်ကို စတင်စီးဆင်းတယ်။ တရုတ်ပြည်၊ ဆိကျင်း ပြည်နယ် လတ္တီတွဒ် ၃၀ ဒီဂရီရောက် အရှေ့တောင်ဘက်ကို ချိုးဝင်ကာ ယူနန်ပြည်နယ်ထဲ ရောက်သွားတယ်။
ယူနန်ပြည်နယ်ထဲရောက်တဲ့အချိန် သံလွင်မြစ်ဟာ မြောက်ဘက်ကနေ တောင် ဘက်ကို စီးဆင်းပြီး လတ္တီတွဒ် ၂၇ ဒီဂရီအရောက် သံလွင်မြစ်ဟာ မေခမြစ်နဲ့ လွန်စွာနီး ကပ်ခဲ့ပြီး တောင်တစ်လုံးပဲ ခြားပါတော့တယ်။ မဲခေါင်မြစ်နဲ့တော့ မိုင် ၃၀ ခန့်ဝေးတယ်။
လတ္တီတွဒ် ၂၄ ဒီဂရီအရောက် ရှမ်းပြည်နယ်ထဲ စစီးဝင်ပြီး ၀နယ်၊ ကိုးကန့်နယ်၊ တန့်ယန်း၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းပန်၊ မောက်မယ်တို့ကို ဖြတ်ကာ ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ နယ်ခြားမြစ်အဖြစ် တည်ရှိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်ကို ဖြတ်သန်းကာ လတ္တီတွဒ် ၁၆.၅ ဒီဂရီ မော်လမြိုင်အနီး မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့မှတစ်ဆင့် ပင်လယ်ထဲကို စီးဝင်တယ်။
မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ထဲ ၀င်သွားတဲ့အချိန် မြစ်နှစ်ခြမ်းကွဲသွားပြီး ဘီလူးကျွန်းရဲ့ မြောက်ဘက်ကိုစီးသွားတဲ့မြစ်ကို နမ့်တိန်မြစ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘီလူးကျွန်းတောင်ဘက် ကိုစီးသွားတဲ့အပိုင်းကတော့ မော်လမြိုင်မြစ်လို့ ခေါ်တယ်။ နမ့်တိန်မြစ်အတွင်း လှေငယ်များ ဖောင်များသာ သွားလာနိုင်ပေမယ့် မော်လမြိုင်မြစ်အတွင်းတော့ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများ မော်လမြိုင်မြို့အထိ ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်တယ်။ သံလွင်မြစ်ရေကြောင်းလမ်းကတော့ မိုင် (၁၀၀)နီးပါးလောက်ပဲ အသုံးပြုနိုင်တယ်။
သံလွင်မြစ်ကို တိဗက်တို့က ဂျာမိုငိုချူ (သို့မဟုတ်) နတ်ဂျူ လို့ခေါ်တယ်။ တရုတ်က တော့ လုကျင်း၊ နုကျင်း၊ ဖို့ဆုကျင်း လို့ခေါ်ပြီး ရှမ်းတွေကတော့ နမ့်ခုံး၊ မြန်မာကတော့ သံလွင်မြစ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ ထိုင်းကတော့ မယ့်နမ့်ဆလ၀င်းလို့ခေါ်တော့ အင်္ဂလိပ်တွေ ကလည်း ထိုင်းသံနဲ့အတူ သံလွင်မြစ်ကို Salween River လို့ခေါ်တယ်။
တိဗက်စကား ဂျာမိုငိုချူ ဆိုတာကတော့ တရုတ်ပြည်က မြစ်ပြာကြီးတဲ့။ တရုတ် စကား လုကျင်းကတော့ ရွှေထွက်တဲ့မြစ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ တိဗက်မှာရှိတဲ့ သံလွင်မြစ်ဖျား ကတော့ ရေခဲမြစ်ပါပဲ။ တိဗက်ဒေသ ရေခဲရည် ပျော်သွားတဲ့အချိန် သံလွင်မြစ်ဟာ အပြာရောင် သမ်းနေတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာတော့ သံလွင်မြစ်အရောင်ဟာ ရွံ့ဝါရောင်လိုပါ။
သံလွင်မြစ်အထက်ပိုင်းမှာ စာမရီ၊ ၀ံပုလွေ၊ တောင်ဆိတ် စတာတွေရှိလို့ ပိုပြီး ထင် ရှားတယ်။ (စာမရီဆိုတာ ရေခဲတောင်မှာရှိတဲ့နွားကိုခေါ်တယ်။ အမွေးရှည်တယ်။ ထူးဆန်းတာ က စာမရီရဲ့ အမြီးက နွားမြီးလိုမဟုတ်ဘဲ မြင်းမြီးလို အရင်းကနေ ဖွာဆင်းလာတယ်။ တချို့က စာမရီဆိုရင် ငှက်တစ်မျိုးလို့ထင်ကြတယ် အဲတာ မဟုတ်ဘူး။ စာရေးသူ တိဗက်နယ်စပ် ရောက်တုံးက အဲဒီ စာမရီကို မြင်ဖူးခဲ့တယ်။) သံလွင်မြစ်တစ်လျှောက် ပင်လယ်ဝမှာရှိတဲ့ သံလွင်မြစ်ကမ်းမှအပ လူအများဆုံးနေတဲ့ ဒေသကတော့ တရုတ်ပြည်ထဲရှိ လုကျင်းဒေသ ပဲဖြစ်တယ်။
ရေစီးသန်တယ်။ အထက်ပိုင်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းပြီး လွန်စွာလှပတယ်။ ကမ်းပါးနှစ်ဘက်စလုံး ကမ်းပါးပြတ်ကြီးအဖြစ် တည်ရှိပြီး အထက်ကနေကြည့်ရင် သံလွင်မြစ်ဟာ ကျောက်ကမ်းပါးနှစ်ခြမ်း ကွဲအက်နေတဲ့ပုံနဲ့တူတယ်။ ထူးခြားမှုကတော့ သံလွင်မြစ်ရဲ့ ကမ်းပါးအမြင့်ဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ပေပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်မှ ၆၀၀၀ ကျော်အထိ မြင့်မားကြလို့ လေယာဉ်ပေါ်ကနေကြည့်ရင် ချောက်နက်ကြီးလို ထင်ရတယ်။
သံလွင်မြစ်ဟာ ပင်လယ်ဝမှလွှဲပြီး အထက်ပိုင်းမြစ်တစ်လျှောက်လုံး မြစ်ကမ်းမြို့ မရှိပါဘူး။ နွေရာသီရောက်တဲ့အချိန် ကမ်းနံဘေးမှာ ရေတိုက်ပြီး ပါလာတဲ့ သဲမှုန့်တွေ၊ ကျောက်ခဲတွေ လွင်ပြင်အဖြစ် မြင်တွေ့ရတယ်။ မိုးတွင်းမှာတော့ ကမ်းဘေးမှာ ဘာမှမတွေ့ ရတော့ဘဲ ကမ်းဘေးမှာ ရှိတဲ့ သစ်ပင်တွေလည်း ရေတိုက်စားသွားကုန်တယ်။
သံလွင်မြစ်ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့ ရေလျှော့ကျမှုဟာ ၆၀ ပေ၊ ၇၀ ပေအထိကွာတတ် တယ်။ တချို့နေရာကတော့ ပေ ၉၀ အထိကွာဟတယ်။ ရေစီးသန်မှုကြောင့် မြစ်အတွင်းမှာ ကျောက်ဆောင်တွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ရေ၀ဲကလည်း ပေါများ၊ ရေတံခွန်လည်း များတဲ့အတွက် ရေလမ်းခရီး ခက်ခဲစေတယ်။ မိုးတွင်းကာလ ရေလည်မှာရှိတဲ့ကျောက်ဆောင်တွေကို ရေမြုပ်ပေမယ့် သင်္ဘောသွားလာမှု ခက်ခဲတယ်။
သံလွင်မြစ်အရှည်ကတော့ မိုင်ပေါင်း ၁၇၅၀ ရှိပြီး မြန်မာပြည်အတွင်းမှာတော့ မိုင်ပေါင်း ၆၅၀ မိုင်ပါ။ သံလွင်မြစ်ဟာ ဧရာဝတီမြစ်ထက် ရှည်သော်လည်း ရေလမ်းခရီး အတွက် ဧရာဝတီမြစ်လောက် အသုံးမ၀င်ပေ။ သစ်ဝါးမျှောရန်အတွက်ကား အသုံးဝင်၏။
ခပ်စောစောပိုင်းတုံးက မြန်မာပြည်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ သံလွင်တံတား မဆောက်နိုင်သေးခင် ကူးတို့နဲ့သာ ကူးကြတယ်။ မြန်မာပြည်အတွင်း သံလွင်ကူးတို့ဆိပ် ၈၈ ခု လောက်ရှိပြီး အမြင့်ပေ ၁၀၀၀ ကျော်လောက်ရှိကြတယ်။ ပင်လယ်ဝမှလွှဲ၍ သံလွင်မြစ်ကမ်း မြို့တစ်မြို့မှ မရှိဘူး။ ကူးတို့ရွာ ခေတ္တရွာတွေလောက်ပဲ ရှိကြတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ကူးတို့ဆိပ်က တော့ ကွမ်းလုံ၊ မန်းဆိုင်၊ တာကော်၊ တာဆန်း၊ တာတော်မော်၊ တာဆုတ်ပိုင်း၊ တာဆန်းလေး တို့ပဲဖြစ်တယ်။
ယခုအစစအရာရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်မှာ တည်ဆောက်မှု နည်းပညာတိုး တက်လာတဲ့အတွက် တရုတ်ပြည်တွင်လည်း သံလွင်ကူးတံတားများ၊ ဆည်များ များစွာ ပေါ် ထွန်းလာခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ထင်ရှားသော သံလွင်မြစ်ကူးတံတားများ ကတော့ တာကော်အက်တံတား၊ တာကော်တံတား၊ တာဆန်းတံတား၊ မော်လမြိုင်တံတား တို့ ဖြစ်ကြတယ်။
သံလွင်မြစ်ကို ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ တရုတ်ပြည်မှာရော မြန်မာပြည်မှာပါ ဆည်တွေတည်ဆောက်နေကြတယ်။ တချို့က သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ထိမ်းသိမ်းကြစို့ဆိုပြီး ကန့်ကွက်ကြတယ်။ တချို့ကတော့ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ရင် များစွာအသုံးဝင်မယ်ဆိုပြီး ဆည်လုပ်တဲ့သူကလုပ် ကန့်ကွက်တဲ့သူက ကန့်ကွက်နဲ့ ဖြစ်နေပေမယ့် သံလွင်မြစ်ကတော့ ပင်လယ်အထိ စီးဆင်းမှာပါပဲ။
သံလွင်မြစ်ကမ်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကတော့ တံငါလုပ်တယ်။ တချို့ သစ်ဝါး မျှောတယ်။ ရွှေကျင်တယ်။ သံလွင်ရွှေကတော့ မာတယ်။ ရွှေဝါရောင် ဖျော့တယ်။ သံလွင်မြစ် ကမ်းရှိ သဲသောင်ပြင် ကျောက်ခဲပြင်တွေဟာ လွန်စွာလှပတယ်။ အမဲရောင်ရှိတဲ့ သံလွင် ကျောက်ခဲဟာ ချစ်စရာကောင်းတယ်။ ရွှေစစ်မစစ် စမ်းသပ်ရာမှာ အသုံးဝင်တယ်။ သံလွင် ကျောက်ခဲဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ မိုင်ပေါင်းများစွာ ရေတိုက်စားလာတဲ့ကျောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အချို့ပြားချပ်ပြီး လှပစွာ ၀ိုင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ အနက်ရောက် ကျောက်ပြားဝိုင်းတွေ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သံလွင်သဲမှုန့်ကတော့ မြေမရောတဲ့ သဲမှုန့်အစစ်ဖြစ်လို့ အဆောက်အဦဆောက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်၏။
သံလွင်မြစ်အတွင်းရှိငါးတွေလည်း မျိုးပေါင်းများစွာရှိမှာပါ။ နာမည်ကြီးတာကတော့ ငါးကြင်းမြီးကွဲလို သံလွင်ငါးပဲဖြစ်တယ်။ ရေစီးသန်တဲ့အတွက်ကြောင်း သဘာဝအလျှောက် သံလွင်ငါးတွေဟာ ကိုယ်လုံးရှည်တာများတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သံလွင်ငါးမြီးကွဲဟာ ကမ်းစပ် နားရေသောက်ဆင်းလာတဲ့ သတ္တ၀ါငယ်များကို အမြီးနဲ့ရိုက်လှဲပြီး ဖမ်းစားတတ်တယ်။ သံလွင် ငါးရဲ့ အရသာဟာလည်း အများနဲ့ မတူ တမူထူးခြားတဲ့ အရသာရှိတယ်။ သံလွင်မြစ်ကမ်းမှာ ပေါက်တဲ့ ဟင်းရွက်တစ်မျိုးကို ရှမ်းလို (ဖတ်ခုံး) ဟုခေါ်ပြီး မြန်မာလိုတော့ သံလွင်ဟင်းရွက် စိမ်း လို့ပဲခေါ်ရမယ်ထင်တယ်။ ချက်စားရင် အရသာဆိမ့်တယ်။ ကင်းမွန်ရွက်ထက် အရသာ ပိုဆိမ့်တယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ သံလွင်ကန်စွန်းဥပါ။ ကန်စွန်းဥနီလိုပါပဲ။ သို့သော် ဥတိုင်း လိုလို ပိုးထိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ပြုတ်စား ချက်စားရင်တော့ အထဲမှာ အနီရောင် အညို ရောင်ရှိပြီး ရိုးရိုးကန်စွန်းဥထက် အရသာကိုပိုပြီး ချိုတယ်။ မာတယ်။
မြစ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့အတွက် မြစ်လက်တက်များစွာ ရှိတတ်စမြဲပါ။ သံလွင်မြစ် လည်း ထို့အတူပါပဲ။ သို့သော် တိဗက်၊ တရုတ်ပြည်အတွင်းမှာ သံလွင်မြစ်ရဲ့ မြစ်လက်တက် ဘယ်လောက်ရှိတာကို မသိရပေမယ့် မြန်မာပြည်အတွင်းမှာတော့ ၂၈ ခုရှိတယ်။
(၁) နမ့်ယုချောင်း – တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တွင် စီးဝင်သည်။
(၂) နမ့်မွေချောင်း – မိုင်းယမှ စီးဝင်သည်။
(၃) ဆီအောချောင်း – ကိုးကန့်နယ်မှ စီးဝင်သည်။
(၄) နမ့်နင်းချောင်း – အနောက်ဘက်မှ စီးဝင်သည်။
(၅) နမ့်တိန်မြစ် – ကွမ်းလုံမြို့အနီး စီးဝင်သည်။
(၆) နမ့်ကျစ်ချောင်း – ချောင်းငယ်သာဖြစ်၏။
(၇) နမ့်မ – ၀နယ်မှ စီးဝင်သည်။
(၈) နမ့်နင်း – ညက်လေ့ (၀နယ်)မှ စီးဝင်သည်။
(၉) နမ့်ကောင်ချောင်း – မိုင်းလင်းနယ်မှ စီးဝင်သည်။
(၁၀) နမ့်ခါချောင်း – ဟိုလိန်းစေတီ အထက်မှ စီးဝင်သည်။
(၁၁) နမ့်လုံချောင်း – တာကော်အနီး စီးဝင်သည်။
(၁၂) နမ့်ပန်ချောင်း – ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်တွင် စီးဝင်သည်။
(၁၃) နမ့်ဆင်ချောင်း – ကျိုင်းတုံမှ ဆင်းသက်လာပြီး စီးဝင်သည်။
(၁၄) မယ်ယန်းချောင်း – မိုင်းဟန်အနီးမှ စီးဝင်သည်။
(၁၅) နမ့်ပန်ချောင်း – မိုင်းပန်မြို့နယ်မှ စီးဝင်သည်။
(၁၆) မဲချောက် – ချောင်းငယ်သာဖြစ်သည်။
(၁၇) နမ့်ဆကွန် – ချောင်းငယ်သာဖြစ်သည်။
(၁၈) မယ်စဲ့ချောင်း – ကယားပြည်နယ်မှ စီးဝင်သည်။
(၁၉) နမ့်တန် (ခေါ်) နမ့်တိန်းချောင်း – မိုင်းကိုင်မှ စီးဆင်းလာသည်။
(၂၀) ဟွေလောင်ချောင်း – ရှမ်းပြည်နယ် ကယားပြည်နယ် နယ်စပ်တွင် စီးဝင်သည်။
(၂၁) ဟွေလန်းချောင်း – ရှမ်းပြည်နယ် ကယားပြည်နယ် နယ်စပ်တွင် စီးဝင်သည်။
(၂၂) နမ့်မယ်ပိုင်း – မယ်ဟောင်ဆောင်ကို ဖြတ်ပြီး စီးဝင်သည်။
(၂၃) နမ့်ပွန်ချောင်း – ကယားပြည်နယ်တွင် စီးဝင်သည်။
(၂၄) သောင်းရင်းမြစ် – ထိုင်းနှင့် ကရင်နယ်စပ်တွင် စီးဝင်သည်။
(၂၅) ယွန်းစလင်း – အနောက်ဘက်မှ စီးဝင်သည်။
(၂၆) ဒုံတမိ – အနောက်ဘက်မှ စီးဝင်သည်။
(၂၇) ကျိုင်းမြစ် – အရှေ့ဘက်မှ စီးဝင်သည်။
(၂၈) အတ္တရံမြစ် – အရှေ့ဘက်မှ စီးဝင်သည်။
ဒီမြစ်လက်ထက်တွေထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့မြစ်လက်တက်ကတော့ နမ့်ခါ၊ နမ့်ပန်၊ နမ့်ဆင်၊ နမ့်တန်၊ နမ့်ပွန်၊ သောင်းရင်းမြစ်၊ ယွန်းစလင်းမြစ်တို့ဖြစ်ကြတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မြစ် လက်တက်တွေဟာ သံလွင်မြစ်ထဲ စီးဝင်တဲ့အချိန် ရေတံခွန်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ဆင်ခြေလျှောအဖြစ်သော်လည်းကောင်း စီးဝင်ကြတယ်။
သံလွင်မြစ်ဟာ ရေတံခွန်တွေ၊ ရေလည်ကျောက်ဆောင်တွေ ပေါများတဲ့အပြင် ရေစီး လည်းသန်တဲ့အတွက် ရေလမ်းခရီး အသုံးသိပ်မ၀င်ဘူး။ ပင်လယ်ဝအနီးတစ်ဝိုက်လောက်သာ ရေလမ်းခရီး အသုံးပြုနိုင်တယ်။ ရေစီးသန်ပေမယ့် ယခုခေတ် ခေတ်မီအားကောင်းတဲ့ အင်ဂျင် စက်တပ်ရေယာဉ်များလည်း သံလွင်မြစ်အတွင်း တစတစ စတင်ခုတ်မောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရှမ်းစာရေးဆရာ ဟိုင်းဆေခိုင် ၏ ဆောင်းပါးကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ထားသည်။
Get: Sao Su Kham
12:10 PMTAIFAMOUS No comments
၁၉၄၄ ခု နိုဝင်ဘာလတုံးက ဝါဒမတူ အယူမမျှမှုကြောင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးကြီး တောက်လောင်နေတဲ့အချိန်ပါ။ ရှမ်းပြည်မှာတော့ ဂျပန်စစ်သားတွေ ရောက်လာကြပြီး ပြည်သူပြည်သားတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။
အဲဒီပြည်သူတွေထဲမှာ စိုင်းဘခိုင်နဲ့ နန်းအေးစိန်တို့လည်း စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ကို တိမ်းရှောင်ရင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နမ့်ကတ်ရွာကို ရောက်လာကြတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ နန်းအေးခိုင်ကလည်း ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတော့ အဲဒီနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ တနင်္လာနေ့မှာ သားဦးရတနာကို ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး စိုင်းကျော်စံလို့ ကင်ပွန်းတပ်ပေးလိုက်တယ်။ စိုင်းကျော်စံမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကတော့ စစ်ကြောင့် လူတွေ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်နေလေတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း လူတွေကို ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်စေမည့် ရှမ်းနာမည်ကျော်တေးရေးဆရာ စိုင်းလောဝ်ဆိုင် ဖြစ်လာခြင်းနိမိတ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
အဘိုးနာမည်ကတော့ ပူလွယ်ထမ်းရွက်ဖြစ်ပြီး အဖိုးရဲ့ ညီမကတော့ နန်းနလုံတဲ့။ အဖွားကတော့ နိုင်းလွယ်စင်ဖြစ်ကာ အဖွားရဲ့ အစ်မကတော့ နန်းအေးဆာပါ။ နောက်အစ်ကို တစ်ယောက်ရှိသေးတယ် စိုင်းဆန်စိုင်းတဲ့။ ညီတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကတော့ စိုင်းဆန်ထွန်း ဖြစ်ပြီး သိန္နီမှာနေထိုင်ကာ မျိုးရိုးကတော့ ပျဲန့်မျိုးဖြစ်တယ်။
စိုင်းလောဝ်ဆိုင်ရဲ့ တစ်အူတုံဆင်း ခြောက်ယောက်ရှိပြီး သူကတော့ အစ်ကိုကြီးပေါ့။ ကျန်တာတွေကတော့ စိုင်းရွှေလှ(ခေါ်) စိုင်းလိန်ခမ်း၊ စိုင်းအိုက်ဆမ်၊ စိုင်းညွှန့်မောင် (ခေါ်) စိုင်းဆိုင်မောဝ်၊ စိုင်းတား(ခေါ်) စိုင်းလှိုင်းဆိုင်နဲ့ နန်းသိန်းဟန် တို့ဖြစ်ကြတယ်။
၁၉၄၇-၄၉ တုံးက မိဘတွေနဲ့အတူ လားရှိုးကို ပြောင်းလာကြပြီး စာရေးကုန်းရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်ကာ ၁၉၅၂ မှာ လွယ်ရိုး အလယ်တန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။ ၁၉၅၃ မိခင်ဆုံးပြီးတဲ့နောက် မူဆယ်ရှိ အဖိုးနဲ့ အဖွားထံ လာနေပြီး ၁၉၅၄ ခုမှာ မူဆယ် အလယ်တန်း ကျောင်းတက်ကာ ပဉ္စမတန်းကို အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် အဖိုးဖြစ်သူက သူ့ကို ကွတ်ခိုင်မြို့ Stealer Marist Convent ကျောင်းမှာ ၂ နှစ်သွားထားတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၅၇ မှာတော့ နမ့်ခမ်းမြို့ နောင်စန့်တောင်ပေါ်ကျောင်းမှာ သတ္တမတန်းကို အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
၁၉၅၇ – ၅၈ အဖိုးဖြစ်သူက စီးပွားရေးကြောင့် တောင်ကြီးကို ပြောင်းသွားတော့ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်နဲ့ ညီဖြစ်သူ စိုင်းဆိုင်မောဝ်လည်း လိုက်ပါသွားရပြန်တယ်။ ၁၉၅၉ မှာတော့ တောင်ကြီး အမှတ် (၁)ကျောင်းမှာ အဋ္ဌမတန်းကို အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ မကြာခင်မှာ အဖိုးဖြစ်သူက ရန်ကုန်ကို ပြောင်းသွားပြန်တော့ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်လည်း အလုံမြို့နယ်၊ ကူရှင်ကျောင်း (ယခု အမှတ် ၄ အထက)မှာ ကျောင်းတက်ပြီး ၁၉၆၀-၆၁ မှာတော့ High School Final) ကိုအောင်ကာ ဆယ်တန်းကို ဆက်တက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပညာရေး ကံက အဲလောက်ပဲပါလာသလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဆယ်တန်းမှာပဲ အဆုံးသတ်သွား တယ်။ လူဘဝသင်တန်းကျောင်းကတော့ သက်ဆုံးတိုင် လူတိုင်း ဆက်လေ့လာသင်ယူရဦး မှာ ဖြစ်တယ်။
မျိုးစေ့တစ်စေ့ဆိုတာ မြေသြဇာကောင်းနဲ့ မတွေ့သေးရင်၊ မိုးရေ၊ ရေစသဖြင့် မတွေ့သေးရင်၊ နေရောင်ခြည်နဲ့မထိတွေ့သေးရင် အပင်မပေါက်နိုင်သေးဘူး။ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်လည်း အဲဒီ အတိုင်းပါပဲ။ ၁၉၇၂-၇၃ ခုမှာတော့ ညီဖြစ်သူ စိုင်းဆိုင်မောဝ်နဲ့အတူ ကျိုင်းဟိုင်း(ထိုင်းနိုင်ငံ)မှာ ရှမ်းခေတ်သစ် သီချင်းသွားသွင်းဖြစ်တာကြောင့် ရှမ်းသီချင်းရေးဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ်။ အဲဒီကစ မျိုးစေ့ရလာပြီး လမ်းပွင့်သွားတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ အစ်ကိုဖြစ်သူက သီချင်းရေး၊ ညီဖြစ်သူက အသံကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါ ရှမ်းပရိသတ်များအတွက် နားဝင်ပီယံဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူတို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကတော့ ခေါက်ဆွဲစားတဲ့အချိန်မှာ အသုံး ပြုရတဲ့ တူလိုပဲ။
တူဆိုတာဟာ နှစ်ချောင်းရှိမှ လိုရာကို ညှပ်စားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ သူတို့ညီအစ်ကိုလည်း ဒီတူအတိုင်းပါပဲ။ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်းဒေသမှာ တူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်သားစရာ တစ်ခုရှိဖူးတယ်။ ကိုးသိန်းသခင် သိုခန်ဘွားနဲ့ သူညီ စစ်သူကြီးခွန်ဆမ်တို့ အကြောင်းပါ။
စစ်သူကြီးခွန်ဆမ်ဟာ အစ်ကိုဖြစ်သူရဲ့ အမိန့်အရ အေဒီ ၁၂၃၀ မှာ မောအင်ပါယာကို ချဲ့ထွင်စဉ် ရခိုင်၊ မဏိပူ၊
အာသံဒေသကို အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ သို့သော် တခြားစစ်သူကြီးတွေ သွေးထိုးမှုကြောင့် သိုခန်ဘွားက ညီဖြစ်သူအား အထင်မှားပြီး အဆိပ်ခတ်သတ်ခဲ့တယ်။ ညီတော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်း မယ်တော်ဖြစ်သူက သိုခန်ဘွားအား ဆုံးမရန်အတွက် ထမင်းစားချိန် တူတစ်ချောင်းသာ ထဲ့ပေးလိုက်တယ်။ သိုခန်ဘွားက စိတ်ဆိုးပြီး (တူတစ်ချောင်းထဲ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ၊ ဒါဘယ်သူလုပ်လာသလဲ)တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ မယ်တော်ဖြစ် သူက (မယ်တော်လုပ်လာတာ တူတစ်ချောင်းထဲ ဘာမှ ညှပ်ယူလို့ မရသလို ညီတော်ကို သတ် ပြီးတဲ့နောက် တစ်ယောက်ထဲ ဘယ်တိုင်းပြည်ကို ထပ်ပြီး တိုက်နိုင်မလဲ)တဲ့။ မယ်တော်ပြောတဲ့ စကားက ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း ညီညွတ်ဖို့အတွက် လွန်စွာတန်ဖိုးရှိလှတယ်။ အနုပညာလော ကမှာ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်နဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်တို့ ညီအစ်ကိုလဲ ဒီတူနှစ်ချောင်းလိုပဲ။
၁၉၇၆-၇၇ မှာ ဇင်းမယ် New Brother ကုမ္ပဏီရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ စိုင်းဆိုင်မောဝ် က သီချင်းသွားဆိုပြီး စိုင်လောဝ်ဆိုင်က သီချင်းသွားရေးခဲ့လို့ ရှမ်းအမှတ်တရ တေးသီချင်း အမှတ် ၀၀၁၊ ၀၀၂၊ ၀၀၃ ထွက်လာတယ်။ ရှမ်းပရိသတ်များ အကြိုက်သီချင်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ တေးရေးသူရဲ့ အမည်ကိုလည်း အဲဒီအချိန်မှာ အများအတွက် ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ဆိုပြီး စိုင်းလောဝ် ဆိုင် (ကြည်လင်လင်းလက်သောကြယ်)ဆိုတဲ့ နာမည်တပ်ခဲ့တယ်။
အတွေးအခေါ် ဉာဏ်မမီတာက တစ်ကြောင်း၊ စာသားတွေ မကြင်လည်တာကတစ် ကြောင်း စတာတွေကြောင့် သီချင်းစရေးတုံးကတော့ အခက်အခဲဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ ဒါပေမယ့် ရေးရင်းကျင့်ရင်းနဲ့ ခက်တာတွေလည်း သွက်လာတယ်၊ တန်ဘိုးမရှိတဲ့စကားတွေလည်း တန် ဘိုးရှိလာတယ်။ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်ရဲ့သီချင်းတွေလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ သီချင်းရေးတယ်ဆိုတာ လွယ်တော့မလွယ်ပါ။ တချို့ကဒီလိုထင်တတ်သေးတယ်။ ဂီတာတီးတတ်မှ သီချင်းရေးတတ် တယ်ပေါ့။ အဲဒါ မဟုတ်ပါဘူး။ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်က ဂီတာမတီးတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သီချင်း ရေးဖွဲ့တတ်တယ်။ ဂီတာတီးတတ်ပြီး သီချင်းပါရေးဖွဲ့တတ်ရင်တော့ ရှမ်းအဆိုတော် စိုင်းမူးလို တေးသွားတွေ ပိုပြီး လှပခန့်ညားမှာပေါ့။
စိုင်းလောဝ်ဆိုင်ရဲ့ သီချင်းစာသားတွေကလည်း ကောင်းမွန်၊ ဆိုတဲ့သူ စိုင်ဆိုင်မောဝ်ရဲ့ အသံကလည်း ကောင်းလွန်လေတော့ ထွက်ခဲ့တဲ့ စီးရီးတွေဟာ ရှမ်းပရိသတ်များအတွက် ပျားရည်ဆမ်းသီချင်းလို့ ဆိုရပါမယ်။ သီချင်းသွင်းပြီး အပြန်လမ်း(မိုင်းပန်-လင်းခေးလမ်း)မှာ မိုင်းပန်အရောက် နောင်လေရွာမှာ မူလတန်းပြဆရာလုပ်နေတဲ့ ရှမ်းအဆိုတော်ဖြစ်လာမည့် စိုင်းမူးနဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်သေးတယ်။
လူဆိုတာ သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ ရှိစမြဲပါ။ သို့သော် ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာ တချို့ မိမိရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်လာသလို တချို့လည်း သဲထဲရေသွန်ဖြစ်စမြဲပါ။ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်က လည်း ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားစွာနဲ့ ငွေထောချင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်တဲ့ အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ ၁၉၈၃-၈၅ တုံးက ကျောက်စိမ်းလောပန်းဖြစ်ဖို့ဆိုပြီး ဖားကန့်၊ မျောက်ဖြူမှော်မှာ ကျောက်တူးသမားဖြစ်ခဲ့တယ်။ အထင်နဲ့ အမြင်နဲ့လွှဲကာ အလုပ်မဖြစ်ဘဲ ၁၉၈၆ မှာ တပ်ခေါက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန် ညီဖြစ်သူ စိုင်းဆိုင်မောဝ်က မန္တလေး ၆၃ လမ်း၊ ၂၉-၃၀ အကြားမှာနေနေတုံးပါ။ ၁၉၉၁ ခုမှာတော့ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်ဟာ နန်းသီတာနဲ့ အိမ်ထောင် ကျခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း
(၁) စိုင်းခမ်းဆိုင် (၂) စိုင်းအွမ်ဆိုင် (၃) စိုင်းဖုန်းဆိုင် သားသုံးယောက် ထွန်းကားခဲ့တယ်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ ကျိုင်းတုံမှ စိုင်းကျော်ကျော်၊ မန္တလေး Onpa တေးသံသွင်းမှ စိုင်းအောင်လှိုင်းဆိုင်၊ နမ့်ခမ်းမှ စိုင်းထုံ့လှိုင်းဆိုင်တို့က နန်းခမ်းနောင့်(နမ့်ခမ်း )အတွက် သီချင်း ရေးပေးရန် တောင်းဆိုလာလို့ ရှမ်းသီချင်း တစ်ခွေစာ ရေးပေးလိုက်တယ်။ နန်းခမ်းနောင့် လည်း အနုပညာပါရမီးရှင်တစ်ဦးဖြစ်လို့ သူမပွဲဦးထွက်ခွေဖြစ်တဲ့ (မတ်ဟိုစိုင်လျက်ငင်း = အသပြာ နှလုံးသား)စီးရီးဟာ တကယ့်ပေါက်စီးရီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ နဂိုကတည်းက သီချင်းစာသားလှတဲ့ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်ရဲ့ အရေးအသားကို ပိုမိုပြီး ထင်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ရှမ်းသီချင်း၊ ဗမာသီချင်း ၉ ခွေစာလောက် ရေးဖြစ်ခဲ့တော့တယ်။
အစတုံးက စိုင်းလောဝ်ဆိုင်ဟာ သူ့ရဲ့ညီ စိုင်းဆိုင်မောဝ်အတွက်ပဲ သီချင်းတွေရေး ပေးတယ်။ တခြားသူတွေအတွက် မရေးပေးဘူးလို့ ထင်နေကြတယ်။ နန်းခမ်းနောင့်ရဲ့ အသပြာ နှလုံးသား ထွက်လာတော့မှ အားလုံးသဘောပေါက်ပြီး နောက်ပေါက်အဆိုတော် တွေ သူ့နဲ့အဆက်အသွယ် လုပ်လာကြတော့တယ်။ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်လည်း အနုပညာစိတ် ဓါတ်အပြည့်အဝရှိသူပါ။ သူဖန်တီးလာတဲ့ တေးသီချင်းတွေဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် မဟုတ်ဘဲ အများသူငါ ခံစားနားဆင်ဖို့ပါ။
စိုင်းလောဝ်ဆိုင်ဟာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီး ရှမ်းသီချင်းသစ်တွေ များ စွာရေးသားနိုင်ခဲ့တယ်။ မိမိရဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ် ယုံကြည်စွာနဲ့လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ တယ်။ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ဦးဆောင်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ လက်တွဲဖေးကူခဲ့ တယ်။ သူရေးခဲ့တဲ့သီချင်းတွေကတော့ အချစ်ကို ဦးစားပေးတဲ့သီချင်း၊ ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သီချင်း၊ အသိပညာပေး သီချင်း၊ ရိုးရာသီချင်း၊ အမျိုးသားရေးသီချင်းတွေ များစွာသီကုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ ရှမ်းသီချင်းအပုဒ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်၊ မြန်မာသီချင်း အပုဒ် ၃၀ ကျော်ရေးသားနိုင်ခဲ့တယ်။ ရှမ်းဗုဒ္ဓဝင်၊ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးစီးရီးတစ်ခွေကိုလည်း ကို
ယ်တိုင်ရေး စပ် သီဆိုခဲ့သေးတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း သူများနဲ့အတူ စီရီး ၄ ခွေလောက် ဆိုဖူးသေး
တယ်။ မင်မကုန်သေးသ၍ တေးသီချင်းတွေ ဆက်ရေးဦးမယ်လို့ဆိုတယ်။
စိုင်းလောဝ်ဆိုင်ရဲ့ ပရိသတ်အတွက် အမှာစကားကတော့ . . .
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြပြီး ရိုင်းပင်းကူညီမှု ရှိကြပါစေ။ ချစ်ခင်ခြင်းဟာ ရေရှည်အတွက် ပိုမိုခိုင်မြဲစေတယ်။ အကျွန်ုပ် စိုင်းလောဝ်ဆိုင် လို့ အမည်ရခဲ့တာကလည်း ပရိသတ်က အသိအမှတ်ပြုပေးလို့ ဒီနာမည်ရလာခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ပရိသတ်အားလုံးကို အစဉ်ထာဝရ လေးစားပါတယ်။ အနာဂတ်မှာလည်း အချင်းချင်း ဆက်လက် ကူညီဖေးမကြပါ။
ယခု နေနေတာကတော့ မန္တလေးက ၂၈ လမ်း၊ ၆၄-၆၅ လမ်းကြား အောင်တော်မူရပ် မှာ မိသားစုနဲ့အတူ နေထို
စိုင်းလောဝ်ဆိုင်ဟာ ရှမ်းလူမျိုးအတွက် ခေတ်သစ်တေးသီချင်းများကို ခေတ်နှင့်အညီ တီထွင်ဖန်တီးပေးကာ အမျိုးဘာသာ သာသနာတော်အတွက် ဂုဏ်တင့်ပေးခဲ့လို့ပင်လုံမြို့ ပိဋကတ်ရှမ်း ဘာသာပြန်အဖွဲ့ချုပ်၊ ပရိယတ္တိသဒ္ဓမ္မပါလ စာပွဲတော်မှ ၁၉၇၀ ပြည့် ကဆုန်လဆန်း ၁၃ ရက် နေ့ (၁၇၊ ၅၊ ၂၀၀၈)၊ ရွှေရတုစာပြန်ပွဲတော်မှာ စိုင်းလောဝ်ဆိုင်အား ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆုကို ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်။ သူကိုယ်တိုင် ဆုတက်ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာ တော့ ပရိသတ်ရဲ့ လက်ခုပ်သံတွေဟာ မိုးထက်သို့ ညံနေခဲ့တယ်။ အဲဒီညမှာ သူကိုယ်တိုင် သူ့အကြိုက်ဆုံး တေးသီချင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေပေးသွားတော့ ရွှေရတုပွဲလာ ပရိသတ်တွေဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူမဆုံး ပီတိတွေဖုံးတဲ့ ညလေးတစ်ညလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
12:01 PMTAIFAMOUS No comments
ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆုရ ဒေါက်တာ စိုင်းခမ်းလိတ်
`ကလောင်သွားဟာ လှံသွား ဓါးသွား၊ လက်နက်သွားထက် ထက်တယ်`လို့ ဆိုရိုးရှိတယ်။ လက်နက်ကိုင်တဲ့သူတချို့ကတော့ ကလောင်သွားက လူကိုထိုးသတ်နိုင်တာမှ မဟုတ်တာ၊ ငါတို့လက်နက်ကသာလျှင် လူကို သေအောင် လုပ်နိုင်တယ် လို့ ဆိုကောင်းဆို မယ်။ လက်နက်သွားက အစဉ်ထာဝရ မပစ်ခတ် မသတ်ဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ လက်နက်ကိုတဲ့သူ လည်း အသက်တစ်ရာအထိ သက်တမ်းမရှည်နိုင်ဘူး။
ကလောင်သွားကတော့ သဘောတရားတစ်ခု စာရွက်ပေါ် ချပြသွားခဲ့ရင် အဲဒီစာသွား အတိုင်း ဆွေစဉ်မျိုးဆက်များစွာ လက်ခံကျင့်သုံးသွားနိုင်တယ်။ အကယ်၍ ကလောင်သွားတစ် ခုက အဲဒါ မင်းတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေ လို့ ဆိုထားခဲ့ရင် နောင်လာနောက်သားတွေက အဲဒီ နယ်မြေကို ပြန်လည်လုယူမှု တိုက်ယူမှုကြောင့် ကမ္ဘာချီစစ်ပွဲကြီးတောင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါ ကြောင့် ကလောင်သွားကို ဘယ်သူကမှ အထင်မသေးဝံ့ပါ။
တကယ်တော့ ဆရာဝန်ဆိုရင် ဆေးထိုးအပ်ကိုင်ရမှာပါ။ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်က တော့ ကလောင်ကိုင်တဲ့ ဆရာဝန် လို့ဆိုရမှာပဲ။ ဒါလည်း မျိုးရိုးကြောင့်ထင်ပါရဲ့။ ဒေါက်တာ စိုင်းခမ်းလိတ်တို့ရဲ့ ဖခင် လုံးခမ်းကာတုန်ဟုန်းဟာ ရှမ်းစာပေလင်္ကာ ရေးဖွဲ့တတ်တဲ့သူ တစ် ယောက်ဖြစ်တယ်။ မိခင်က ဒေါ်နန်းစိန်ဥကတော့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာ စိုင်းခမ်းလိတ်လောင်းလျာကို ၁၉၄၉ ခု ဧပြီလ ၂၇ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ဇာတိ က ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီပါ။
စိုင်းတုမ်ခမ်း၊ စိုင်းခမ်းလိတ်၊ စိုင်းခမ်းသီ၊ နန်းအွမ်ခမ်း ဆိုပြီး မွေးချင်း လေးယောက်ရှိ တယ်။ သူတို့ ညီအစ်ကို သုံးယောက်စလုံး ဖခင်ရဲ့အနုပညာအမွေကို ရရှိတဲ့သူတွေပါ။ အစ်ကို ကြီး စိုင်းတုမ်ခမ်းက ရှမ်းခေတ်သစ်သီချင်းတွေကို ရေးသားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် သူတတ်သမျှ သိသမျှ ညီဖြစ်သူ စိုင်းခမ်းလိတ်ကို သင်ပေးခဲ့သူပါ။ သီချင်းစာသားများဟာ ရေးစပ်သူရဲ့ စိတ် ထားကို တစွန်းတစ ဖေါ်ပြစမြဲပါ။ စိုင်းတုမ်ခမ်းရေးသားတဲ့ ရှမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ဒို့အမျိုးသား တာဝန်မို့ ရှောင်လို့မရပါ သီချင်းအရ သူဟာ အမျိုးသားအတွက် တာဝန်ကို ဦး လည်မသုန် ယူတတ်သူဖြစ်ကြောင်း ပြသလျှက်ပါ။ စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း စိုင်းတုမ်ခမ်းထံ ဝေါဟာရအသစ်အဆန်း ရှာဖွေနည်းကို ရယူခဲ့ သည့်အပြင် သံစဉ်ရှာနည်း အတွေးအခေါ်အယူ အဆ ယူနည်းများကို ကောင်းစွာရရှိခဲ့တယ်။
` ဖခင်ဖြစ်သူက တာဝန်အရ သိန္နီကနေ နမ္မတူမြို့ကိုပြောင်းလာရတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ ညီအစ်ကိုလည်း နမ္မတူကိုရောက်လာတယ်။ ၁၉၅၄ ကတည်းက စိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ နမ္မတူ မူလတန်းကျောင်းကို ပန်ဟိုင်း(နမ္မတူ)မှာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားနာမည်က တော့ Louvis Kham လူးဗစ်ခမ်း တဲ့။
နမ္မတူ သတ္တမတန်းကို အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက် ၁၉၆၃ ခုမှ ပြင်ဦးလွင် (ယခင်မေမြို့) St. Albert High School (ယခု ပြင်ဦးလွင် အမှတ် ၂) မှာ အဋ္ဌမတန်း တက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ တွဲဖက်ကောင်းဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသူ မနွဲ့နွဲ့တင်နဲ့ စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ တွေ့ ဆုံမှုဇာတ်လမ်းဟာ လူအများ စိတ်ဝင်စားခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
နွဲ့နွဲ့တင်ကတော့ စာတော်တဲ့သူဖြစ်ပြီး အတန်းထဲမှာ ပထမနေရာယူခဲ့တဲ့သူပါ။ အဋ္ဌ မတန်းတုံးက လူရည်ချွန်အဖြစ် အရွေးခံလိုက်ရသေးတယ်။ လူရည်ချွန်ဖြစ်ရင် ပညာရေးဝန် ကြီးဌာနက လူရည်ချွန်မောင်မယ်များကို ဒေသန္တရဗဟုသုတရစေရန် မြန်မာပြည်ထင်ရှားတဲ့ ဒေသများ စက်ရုံများ၊ ငပလီအပမ်းဖြေကမ်းခြေစတာတွေကို ခေါ်သွားတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာတော့ အင်းလေးမှာတော့ ခေါင်တိုင်လူရည်ချွန်စခန်း တစ်ခု ယခင်က ရှိခဲ့ဖူး တယ်။ လူရည်ချွန်အရွေးခံရတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူဟာလည်း ထက်မြက်တဲ့ ကျောင်း သူကျောင်းသားအဖြစ် အသတ်မှတ်ခံရတယ်။
လူရည်ချွန်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဉာဏအားလည်း ကောင်းရသလို၊ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်း ရမယ်၊ ပြီးတော့ စာလည်းတော်ရမယ်၊ ဘက်စုံထူးချွန်ရမယ်ပေါ့။ လူရည်ချွန် အင်တာဗျူးမှု တစ်ခုကတော့
`မင်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ဖူးဘူးသလား`
` စေတီရင်ပြင်တော်အရောက် လှေခါး ဘယ်နှစ်ထစ်ရှိသလဲ` စသဖြင့် မေးတတ်တာ ပေါ့။ သာမန်လူဆိုရင် ဘယ်သူက လှေခါးထစ်တွေကို ရေတွက်ထားမလဲ။ သို့သော် လူရည်ချွန် ဖြစ်မယ့်ကျောင်းသားကတော့ ဒီလို အဖြေပေးလိုက်တယ်။
`ကျွန်တော် ဓါတ်လှေခါးနဲ့ တက်ခဲ့တာပါ ဆရာ`တဲ့ အဲဒါကတော့ ဉာဏ်ရည်ကို စမ်း တာပါ။ ဥပမာ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ မိုးရေကလွဲလို့ ဘာအရည်တွေ ထပ်ရှိသေးသလဲ လို့မေးရင် ချက်ချင်း မဖြေတတ်ကြဘူး။ လူရည်ချွန်လေးတွေကတော့ ဒီလိုဖြေကြတယ်။
လူရည်ချွန်ဖြစ်တဲ့ နွဲ့နွဲ့တင်ကတော့ ရုပ်လှတယ်။ စာတော်တယ်။ အဲဒီခေတ်တုံးက ကျောင်းမှာ စူပါစတားပေါ့။ ကျောင်းသားတွေအားလုံး နွဲ့နွဲ့တင်ကို အားကျသလို စိုင်းခမ်း လိတ်တစ်ယောက်လည်း သူများနည်းတူ နွဲ့နွဲ့တင်ကို အားကျမိသူပါ။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပွဲဦးထွက်ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ကတော့ ကျောင်းနံရံကပ်စာစောင် ကနေ စခဲ့တယ်။ နံရံကပ်စာစောင်ဆိုတာက စာပေဝါသနာပါတဲ့ ကျောင်းသားတွေ လွတ်လပ် စွာ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ ဝတ္ထုတိုတွေရေးပြီး ဆရာဆရာမများက ရွေးချယ်ပြီး ကောင်းတဲ့ဟာ တွေကိုကျောက်သင်ပုံးမှာ လှပစွာ ပြန်လည် ကပ်ထားပေးတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသား တွေက ဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့။ အဲဒီနံရံကပ်စာစောင်မှာ စိုင်းခမ်းလိတ်က ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ရေးကာ သွားကပ်ထားလိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ ခံစားချက်ကို တင်ပြတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတင်ပြချက် ကတော့ အသွားနှစ်ဖက် ရှိတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ကဗျာခေါင်းစဉ်ကိုက လူရည်ချွန်ကို ရအောင်ယူ မည် တဲ့။ ကျောင်းသားတွေ အဲဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတာ ပေါ့။ လူသတင်း လူချင်းဆောင်ဆိုသလို နွဲ့နွဲ့တင်လည်း ကြားသိသွားတယ်။ စုံစမ်းကြည့်တော့ ရေးတဲ့သူက စိုင်းခမ်းလိတ်ဖြစ်နေတော့ ဆရာဆရာမတွေ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအား လုံး အဲဒီအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ နွဲ့တင်ကတော့ မိန်းမသားတစ်ယောက် အနေ နဲ့ သူမကို ယခုလို စောင်းလား ချိတ်လား တင်စီးပြီး ရေးထားတာကို မြင်ရတော့ မခံချင်တာ အမှန်ပါ။ ဒီကျောင်း တစ်ကျောင်းလုံးမှာ သူမတစ်ယောက်ထဲသာ လူရည်ချွန်ဖြစ်နေလေတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က သူမကို ရည်ရွယ်ပြီး တမင်သက်ကက် ရေးတဲ့အကြောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာ ကြီးကို သွားတိုင်ပါလေရော။ ဒီကိစ္စကို ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုယ်တိုင် စိုင်းခမ်းလိတ်ကို ရုံးခန်းမှာ ခေါ်တွေ့တယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ်က ပြုံးပြုံးနဲ့ပဲ အဖြေပေးလိုက်တယ်။
`ကျွန်တော် သူမလို လူရည်ချွန်ဖြစ်ချင်လို့ လူရည်ချွန်ကို ရအောင်ယူမယ်လို့ ရေးတာ ဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ`တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပြဿနာလည်း ပြေလည် သွားတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း ခင်မင်ရင်းနီးသွားတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းအစ လူရည်ချွန်ကလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်း နဝမတန်းရောက်တော့ စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း လူရည်ချွန် အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်။ နွဲ့တင်ကလည်း လူရည်ချွန်နှစ်ထပ်ကွမ်း ဖြစ်ပြန်တယ်။ (ဒသမ တန်းလည်း နွဲ့နွဲ့တင်က လူရည်ချွန် သုံးထပ်ကွမ်းအဖြစ် ထပ်မံရွေးချယ်ခံရပြန်တယ်) မေမြို့ လူရည်ချွန်အနေနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် လူရည်ချွန်ခရီးအဖြစ် အတူတူသွားလာကြရလို့ ပိုပြီး ခင်မင်ရင်းနီးလာပါတော့တယ်။
မေမြို့မှာ ကျောင်းတက်ကတည်းက စိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ ရှမ်း၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်ကဗျာ များကို ရေးစပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ ၁၉၆၅ ခုမှာတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က နမ္မတူမှာ ဒသမတန်း ပြန်လာ တက်ရတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူ လုံးခမ်းကာလည်း သူ့သားဝါသနာပါတဲ့ စာပေအနုပညာကို အားပေးခဲ့တယ်။ ညီဖြစ်သူ စိုင်းခမ်းသီလည်း အစ်ကိုကို ဂစ်တာတီးဖို့ သင်ပေးလိုက်ပြန်တော့ ဂီတာတီးကာ (ဟတ်နိုင်းဖန် = အိပ်မက်ထဲကအချစ်)ဆိုတဲ့ ရှမ်းသီချင်းကို စပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။
ဘာမဆို အကြောင်းရှိမှ အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာစမြဲပါ။ စိုင်းခမ်းလိတ် သီချင်းရေးဖြစ်တာက ဒီလိုပါ . . .
ဝါတွင်းကာလ ဥပုသ်သည်များအတွက် လူပျိုအပျိုများက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဝေယျာဝစ္စ သွားလုပ်ကြတယ်။ ဆွမ်းတော်ပြင်ဆင်ကြရသလို ဥပုသ်သည်အတွက်လည်း ထမင်းဟင်းတွေ ချက်ကြတယ်။ အဖိတ်ညမှာ ထမင်းချက်ပြီးတဲ့နောက် လူပျိုတွေက ဆွမ်းစား ကျောင်းမှာ ညအိပ်စောင့်ကြရတယ်။ တချို့ကတော့ ဂစ်တာယူလာပြီး သီချင်းဆိုကြ ပျော်ကြ တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ရှမ်းခေတ်သစ်သီချင်း နှစ်ပုဒ် သုံးပုဒ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ အဖိတ်နေ့ တိုင်း အဖွဲ့တွေစုံတိုင်း သီချင်းဟောင်းကိုပဲဆိုနေတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်ကမေးတယ် `ရှမ်းသီချင်း အသစ် မရှိတော့ဘူးလား` သူတို့ကလဲ `ဒါပဲရှိလို့ ဒါပဲဆိုနေတာပေါ့`တဲ့ ဒီလိုနဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ် က ရှမ်းသီချင်းတွေ ဖြစ်လာဖို့ အကောင်အထည်ဖေါ်ကြည့်တော့တယ်။
မေမြို့မှာနေတုံးက The Beatles, Shadows, Bob Dylan, Elvis Presley, The Rolling Stones, Elton John, Pink Floyd, Eric Clapton, CCR စတဲ့ နာမည်ကြီး အင်္ဂလိပ် သီချင်းတွေ နားထောင်ဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့် ရှမ်းစာသားတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်သံစဉ်မှာ ထဲ့လိုက်ရင် ပရိသတ်တွေ ကြိုက်ကြမှာပဲဆိုပြီး ကော်ပီသီချင်း အပုဒ် (၂၀) လောက် စပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဂစ်တာတီးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဆိုပြတယ်။ ဘယ်အပုဒ်ပဲဆိုပြဆိုပြ သူငယ်ချင်း တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက `ကောင်းပါတယ်`ပြောပြီး ဒီအတိုင်းပဲ တန့်နေတော့တယ်။ ဘယ်သူမှလဲ အဲဒီသီချင်းတွေကို ယူပြီး မဆိုကြဘူး။
စိုင်းခမ်းလိတ်က စဉ်းစား သဘောပေါက်မိတယ်။ သူများရဲ့ ကော်ပီသံစဉ်နဲ့ ရှမ်းသီချင်း လာရေးစပ်တာ အသံက ကွက်တိမဖြစ်ဘူး။ အသံ မပီပြင်ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လဲ ဖြစ်အောင် အသံလည်း ပီပြင်အောင် တစ်ယောက်တည်း ကြံစည်နေတော့တယ်။ ကော်ပီသံစဉ်ကို လုံးဝ အသုံးမချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
၁၉၆၆ မှာတော့ နမ္မတူကနေ ဒသမတန်းကို ရူပဗေဒ ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကျောက်မဲမြို့နယ်မှာ ပထမရကာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ အမှတ်အများဆုံးရတဲ့ ထူးချွန် ကျောင်းသား ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့်ရတယ်။
ဆေးကျောင်းသားဘ၀ နှင့် တာဝန်
နွဲ့နွဲ့တင်လည်း ဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်ပြီး မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့်ရလေတော့ သူတို့နှစ်ယောက် မန်းမြေ MC မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့ ဖန်လာပြန်တယ်။ ဝါသနာဆိုတာ တားလို့မရပါ ဆိုတဲ့အတိုင်း အနုပညာဝါသနာပါတဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ်ကတော့ ဆေးကျောင်းသားဘဝရောက်နေသော်လည်း သီချင်းရေးနေဆဲ၊ ကဗျာစပ်နေဆဲ၊ သီချင်းဆို နေဆဲ။ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်အတွက်လည်း မလျှော့သောဇွဲနဲ့ အားထုတ်းနေဆဲပါ။
သီချင်းရေးတဲ့နေရာမှာ ပရိသတ်အကြိုက် သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ မလွယ်ဘူးဆိုပေမယ့် စိုင်းခမ်းလိတ်ကတော့ အခက်အခဲကို ကြောက်ရွံ့သူမဟုတ်ချေ။ ကြိုး စားရင် ဘာမဆို ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ရ သူ့ရင်မှာ အမြဲ ကိန်းအောင်းနေလေတော့ တစ်ယောက်တည်း ကြိုးစားခဲ့ရာ ၁၉၆၈ ခုနှစ်ရောက်မှ ရှမ်းလူငယ်များ သဘောခွေ့ မနော တွေ့တဲ့ (ဟိုက်မီးစိုင်ဟတ်ခေး = မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိပါစေ) နဲ့ (လောင်ယဉ်ငေ့တိုင်း ဟိုက်ခွတ် ပန် = ရှမ်းယဉ်ကျေးမှု ခေတ်မီပါစေ) ဆိုတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို အောင်မြင်စွာ စပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။
သီချင်းစာသားများဟာ ရေးစပ်သူရဲ့ အတွင်းသဘောကို ဖော်ဆောင်နေခြင်းပါ။ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သီချင်းထဲမှာ ရှမ်းလူငယ်များကို အမျိုးသားဝတ်စုံဝတ်ဖို့ မြတ်နိုးဖို့ တိုက်တွန်း ထားသလို သူကိုယ်တိုင်လည်း အမြဲတမ်း ရှမ်းဘောင်းဘီ ရှမ်းတိုက်ပုံနဲ့ပဲ ဆေးကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့ သူပါ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုံးကလည်း ရှမ်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကို ဦး ဆောင်ပြီး ရှမ်းစာပေ ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် အစဉ်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ကိုလည်း ယူခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ မန္တလေး တက္ကသိုလ် ရှမ်းစာပေယဉ် ကျေးမှုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ တောင်ကြီးမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ရှမ်းစာပေဆွေးနွေးပွဲကို တက် ရောက်ခဲ့ပြီး လင်းခေးသား စိုင်းထီးဆိုင်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။
တောင်ကြီးမှာ သူတို့နှစ်ယောက် သိစတုံးက ရိုးရိုးပဲခင်မယ်လို့သာ ထင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ခင်မင်ကြပြီး ယခုလို အနုပညာစင်မြင့်မှာ အတူတက်လှမ်းကြရလိမ့်မယ်လို့ မထင် ထားခဲ့မိဘူး။ အစတုံးကတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က စိုင်းဖုန်းကျော် (ခေါ်) စိုင်ခမ်းမတ် (တန့်ယန်း) ရဲ့ အသံကို သဘောကျခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ စိုင်းထီးဆိုင် ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ဒဿနိကဗေဒယူတော့ မန္တလေးတက္ကသိုလ် လာတက်ရင်း စိုင်းခမ်းသီနဲ့ ခင်မင်ခဲ့ကြတယ်။ ညီလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုမိုပြီး ခင်မင် ရင်းနီးလာတော့တယ်။ စိုင်းခမ်းသီလည်း အနုပညာပါရမီရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်း သီချင်းကောင်းတွေ တော်တော်များများ ရေးစပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်ကတော့ ခေတ်လူငယ်တွေ ဂီတာကို စတင်ဝါသနာပါလာချိန်ပဲ။ တီးဝိုင်းတွေ လဲ တစ်ဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ ပေါ်လာစပါ။ ၁၉၇၃ ခုမှာတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ ခွန်မျိုးလွင်၊ စောသိမ်းဝင်းတို့ရဲ့ အဖွဲ့ The Outsiders နဲ့ စိုင်းခမ်းသီ၊ စောဂျွန်ဆင်၊ စောဂျော်နီတို့ရဲ့ အဖွဲ့ The Highlanders ပေါင်းမိကြပြီး မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ The Wild Ones အဖွဲ့ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ စိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာ ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေး မှုတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်သည့်အပြင် သီချင်းရေစပ်မှု၊ သံစဉ်အသွားအလာများကိုလည်း ဉာဏ်မီသမျှ လေ့လာခဲ့သည်။ အသိဉာဏ်ကြွယ်ဝဖို့အတွက် အတွေးအခေါ်စာပေများကိုလည်း လေ့လာဖတ်ရှုခဲ့တယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ်တက်သော်လည်း တက္ကသိုလ်ပညာရပ် တစ်ခုထဲကို သာ လေ့လာခဲ့သည်မဟုတ်၊ ဗဟုသုတမျိုးစုံကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့တယ်။
လေးနက်တဲ့ သီချင်းကို ရေးသားနိုင်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာကျော် တေးသီချင်းများကိုလည်း နားထောင်ပြီး မှတ်သားနည်းယူခဲ့သူပါ။ ဒီ့အပြင် မြို့မငြိမ်း၊ ရွှေပြည်ဧ၊ ဦးဗိုလ်ခင်၊ ဦးအံ့ကြီး၊ ဦးကျော့မှူးစတဲ့ မြန်မာအနုပညာရှင်များရဲ့ သီဆို ဖွဲ့ဆိုမှုကိုလည်း သေချာစွာ လေ့လာခဲ့သေး တယ်။ ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ အဆိုအမိန့်တွေပါမကျန် ဖတ်နိုင်သမျှ မှတ်နိုင်သမျှ အချိန်လုပြီး လေ့လာ ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြတဲ့ Rabindernath Tagore, Robert Frost, Omar Khayyam, Shakespeare, George Bernard Shaw, Ibsen, Leo Tolstoy, Somerset Mangham, Mark Twain, Albert Camus, Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mao Zedong, Jesus Christ, The Buddha တို့ရဲ့အကြောင်း သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ် အဆိုအမိန့်များကို လေ့လာခဲ့တယ်။
သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် အသိပညာကြွယ်ဝရမယ်၊ အတွေးအခေါ် သူများထက် သာရမယ်။ အတွေးအခေါ် ရှိဖို့အတွက် စာကောင်းပေမွန်များကို လေ့လာမှတ် သားနိုင်ရမယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာပေများကို လေ့လာလိုက်စားရုံတင်မက မြန်မာစာပေများကိုလည်း များစွာဖန်ရှုလေ့လာခဲ့တယ်။ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၊ ရှင်မဟာသီလဝံသ၊ လက်ဝဲသုန္ဒရ၊ အနန္တသူရိယ၊ နဝဒေး၊ နတ်သျှင်နောင်၊ ဦးကြင်ဥ၊ စလေဦးပုည၊ သခင်ကိုယ် တော်မှိုင်း၊ ဇော်ဂျီ၊ မောင်စွမ်းရည်၊ ဒဂုံတာရာ၊ မောင်အာနိုး၊ သိပံ္ပမောင်ဝ၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၊ လူထုဒေါ်အမာ၊ အောင်သင်းတို့ရဲ့ စာပေများကိုလည်း စိုင်းခမ်းလိတ် မြတ်မြတ်နိုးနိုးဖတ်ရှုခဲ့ တယ်။
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ စာပေကိုတတ်မြောက်ပြီး မိမိရဲ့ စာပေကို မေ့မေ့ပျောက် ပျောက်ဖြစ်တတ်ကြသော်လည်း စိုင်းခမ်းလိတ်ကတော့ အဲဒီအမျိုးအစားထဲက မဟုတ်ပါဘူး။ သူရေးတဲ့ ရှမ်းသီချင်းတွေထဲက သူ့ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို ဖော်ညွှန်းနေတာ များစွာတွေ့ရပါမယ်။ ရှမ်းစာပေ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝဖို့ စဝ်ကန်းဆေ၊ လုံးခွန်မဟာ၊ လုံးတန်းကေး၊ ဆရာဦးစိုင်းအောင် ထွန်းတို့ရဲ့ စာပေများကိုလည်း ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သေးတယ်။ လူဆိုတာ စာဖတ်များရင် အသိ ဉာဏ်လည်း များလာတာပါပဲ။ အသိဉာဏ်များလာရင် အတွေးအခေါ်လည်း ကောင်းလာမယ်၊ အပြောအဆို အရေးအသားတွေလည်းကောင်းလာမယ်။ ဘာကြောင့် ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ရေးသားတဲ့ စာသားတွေ အဆင့်မြင့်သလဲဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ နားလည်မှာပါ။
စိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ ဘယ်သူကမှ သူ့ကို အသိအမှတ်မပြုခင်ကတည်းက သီချင်းကို ရေးစပ်ခဲ့တာပါ။ အခုမှသာ သူရေးတဲ့ သီချင်းစာသားတွေ ခန့်ညားကြောင်း ကျုပ်တို့သိရပေ မယ့် သူသီချင်းရေးစပ်သီကုံးနေချိန်မှာ သီချင်းသံစဉ် ရှာနေချိန်မှာတော့ ဘယ်သူကမှ သူ့ကို သတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူး။
သူသီချင်းရေးတဲ့နေရာကတော့ အရှိန်အဝါကြီးတဲ့ လျှပ်စစ်မီးအောက်မှာ မဟုတ်ဘဲ မီးမလင်းထိန်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်အလင်းရောင်အောက်မှာ၊ တစ်ခါတစ်လေ လရောင်အောက်မှာ သာ ရေးစပ်ခဲ့တာပါ။ သူထိုင်ပြီး သီချင်းရေးခဲ့တဲ့ ထိုင်ခုံကတော့ မွေ့ယာဆိုဖာထိုင်ခုံတွေ မဟုတ်ဘဲ သင်ဖြူးဖျာစုတ် နဲ့ ပေါက်ပြဲနေတဲ့ ကျမ်းခင်း အဝါရောင်သမ်းနေတဲ့ မြက်ချောက်တွေပါ။ သူ့သီချင်းရေးတဲ့ ဖောင်တိန်ကလည်း ရွှေကလောင်မဟုတ်၊ ခဲတံတိုလေး ဒါမှမဟုတ် မကြာခဏ မှင်စိမ့်ထွက်နေတဲ့ ဖောင်တိန်စုတ်ပါ။ သံစဉ်တွေကို ရှာနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ဂီတာကလည်း လျှပ်စစ်ဂီတာမဟုတ်ဘဲ ကြိုးပြတ်နေတဲ့ ဂီတာစုတ်ပါ။ သူ့ရဲ့ သီချင်းရေးတဲ့ စာရွက်ကလည်း ဖြူလွင်နေတဲ့ လျှောက်လွှာစာရွက်မဟုတ်ဘဲ သူများလွင့်ပစ်ထားတဲ့ ရည်းစာ ရေးထားတဲ့ စာရွက်ဟောင်းတွေပါ။ သူသီချင်းရေး တေးသံစဉ်ရှာနေတဲ့အချိန် သူ့အနားမှာ လာထိုင်ပြီး အားပေးနေတာကတော့ လှပကျော့ရှင်းတဲ့ သူဌေးသမီးမဟုတ်။ သူ့အနားမှာ အမြဲတမ်း ရစ်သီနေတာကတော့ ခြင်နဲ့ ယင်ကောင်တွေပါ။ စည်းနဲ့ဝါး သံစဉ်ရှုာဖို့အတွက် Drum Set မဟုတ်ဘဲ လက်မနဲ့ လက်ခလယ်ကိုသာ အသုံးပြုခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ နာမည် ကြီး သီချင်းရေးဆရာ မဖြစ်ခင်က သူ့ဘဝရဲ့ သန္ဓေအောင်းတဲ့ကာလလို့ ဆိုရပါမယ်။ သူ့ရဲ့ ရှမ်းကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကလည်း ဒီလိုဆိုထားတယ်။
တီးတိုးစကား ပြောတဲ့နေရာကတော့ သူများမကြားတဲ့နေရာ
ဒို့တတွေ အလင်းရောင်ထဲမှာ ရယ်ရယ်မောမော ရှိနိုင်မယ်။ (၁၉၇၆)
အစကတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က ရှမ်းသီချင်းတွေပဲရေးဖြစ်တာပါ။ မြန်မာသီချင်း ရေး ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ ဒီလိုတဲ့။ တစ်နေ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ သွားထိုင်နေတုံး သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို ကြားရတော့ နားထဲမှာ အဲဒီသံစဉ်က အင်မတန် ရင်းနီးနေတယ်။ သီချင်းကတော့ ကိုလေးလွင် ဆိုထားတဲ့ `လယ်သူမလေးချစ်သူ`ဖြစ်တယ်၊ အင်္ဂလိပ်စာသားနဲ့ပါ အတူဆို ထား တော့ မူရင်းအင်္ဂလိပ်သီချင်းလို့ ထင်နေရတယ်။ အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေကပြောလာတယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်းက သူများရဲ့ သံစဉ်ကနေ ရှမ်းသီချင်းရေးထားတာပါတဲ့။ အမှန်မှာတော့ အဲဒီလယ်သူမလေးချစ်သူ သံစဉ်က စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ ရှမ်းသီချင်း (ယိင်းအွန်ဟတ်စိုင်း) သံစဉ်ကို ယူပြီး လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီကစပြီး စိုင်းခမ်းလိတ် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချလိုက်တယ်။ ငါလည်း ဗမာသီချင်းရေးနိုင်ပါတယ်။ ရေးကို ရေးရမယ်. . . တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ဗမာသီချင်း စရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ (ယိင်းအွန်ဟတ်စိုင်း)ရှမ်းသီချင်းကို ဗမာလို ပြန်ရေး တဲ့အခါ လူကြိုက်များတဲ့ ဟိုတုံးက မတွေ့မိရင် ကိုယ်တို့ဇာတ်လမ်းလေးဟာလေ တစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းပါပဲ။
စာရေးဆရာ သီချင်းရေးဆရာတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူများဖတ်ဖို့ နားဆင်ဖို့ ပါ။ စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း မိမိရေးသားတဲ့ သီချင်းတွေ အများပြည်သူ နားဆင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ တယ်။ ဂီတာနဲ့တီးပြီး ခေတ်သစ်သီချင်း တစ်ခေတ်စတင်ပြောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေလို့ ပရိသတ်တွေ ချက်ချင်း လက်မခံနိုင်လို့ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဓါတ်ကျမှု ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ်က သူများနဲ့ မတူခဲ့ဘူး။ သူများက မကောင်းဘူး ပြောရင် ကောင်းအောင် ငါကြိုး စားမယ်၊ အဖန်တစ်ရာမက ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်အပြည့်အဝရှိတယ်။ သူ့သီချင်းထဲမှာ လည်း ရှိတယ်လေ `တစ်ခါလဲရုံနဲ့ အပြီးထိုင်လိုက်တော့မှာလား အကျိုးရယ်မှ မဟုတ်သေး တာ`တဲ့။
ပရိသတ်များ လက်ခံလာအောင် နည်းမျိုးစုံ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပထမဦးဆုံးထွက်တဲ့ `ချစ်တဲ့ရှမ်းရိုးမ`ခွေကို ရန်ကုန်က တေးသံသွင်းတွေ လက်မခံခဲ့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားသံစဉ်နဲ့မြန်မာစာသားကိုတောင် မြန်မာပရိသတ်က လက်မခံနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ စိုင်းခမ်းလိတ်တို့က ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားက မြန်မာလို ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လက်ခံနိုင်ဦးမှာလဲ။ အဲဒီခွေကို တောင်ကြီးမှာပဲ စတင်ဖြန့်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း အဆိုတော်များကတော့ စိုင်းထီးဆိုင်၊ စိုင်းခမ်းသီ၊ စိုင်းခမ်းမတ်၊ စောသိမ်းဝင်း၊ စိုင်းဆေးနော်၊ ဆွန်ကျဲအိုတို့ ပူးပေါင်းပြီး စီးရီးတွေ ထုတ်လာခဲ့ကြတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း အတော့်ကို လက်ခံလာခဲ့တယ်။ သို့သော် ဘယ်သူ့ကို ပိုမိုလက်ခံသလဲ ဆိုတာ မသဲကွဲသေးပါဘူး။ အဲ . . မန္တလေးရောက် ရှမ်းတစ်ယောက် စီးရီးခွေကတော့ ပေါက်ခွေလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ကက်ဆက် လည်း ပေါလာတယ်။ နားထောင်သူတွေလည်း မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံး မန္တလေးရောက် ရှမ်း တစ်ယောက် မဖွင့်တဲ့နေရာ မရှိသလောက် ဖြစ်သွားတယ်။
အဆိုတော်တွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ မိမိကိုယ်တိုင် စီးရီးတစ်ခွေ ထုတ်ချင်ကြတတ် တယ်။ ဒါကြောင့် စိုင်းခမ်းသီလည်း တစ်ခွေသီးသန့်ထုတ်ကြည့်တယ်။ စောသိမ်းဝင်းလည်း ထို့အတူပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အခွေက မပြန့်ခဲ့ဘူး။ စိုင်းထီးဆိုင် ထုတ်တဲ့အခွေ တွေကျတော့ ပရိသတ်က လက်ခံကြတယ်။ ဒါကြောင့် စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်းတွေဟာ စိုင်းထီးဆိုင်ဆိုဖို့ အတွက် ဖြစ်လာတော့တယ်။ စိုင်းထီးဆိုင်လည်း အနုပညာပါရမီထူးသူဖြစ် ကြောင်း စိုင်းခမ်းလိတ်က အဲဒီလိုပြောဖူးတယ်။
“စိုင်းထီးဆိုင်ကတော့ သူ့ကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေ သင်ပေးလိုက်တာနဲ့ သူချက်ချင်း သဘောပေါက်လွယ်တယ်။ ပြောပြတဲ့အတိုင်း သူလိုက်ဆိုနိုင်တဲ့ အနုပညာပါရမီရှင်တစ်ဦးပါ“
သီချင်းရေးတဲ့သူက သီချင်းတွေ ဘယ်လို အရေးကောင်းပေမယ့် ဆိုတဲ့သူ မကောင်း ဘူးဆိုရင် အဲဒီသီချင်းက ကောင်းတဲ့ သီချင်းဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်း တွေ စိုင်းထီးဆိုင် မဆိုခင်က တခြား အဆိုတော်တွေ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ သီချင်း တွေ မပေါက်ခဲ့ကြဘူး။ အဲဒီသီချင်းတွေ စိုင်းထီးဆိုင်ပြန်ဆိုမှပဲ သီချင်းကောင်းတွေ ဖြစ်သွား ကြကုန်တော့တယ်။ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ အသံဟာ စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်းနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး လို့ ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ ၁၉၇၃ ကစပြီး စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ စီးရီးတွေ ဆက်တိုက် ထွက်လာတော့ သလို တေးရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ နာမည်လည်း တဟုန်ထိုး တက်လာတော့တာပါပဲ။
ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သီချင်းကောင်းတွေ၊ စာသားလှလှတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ အဓိက အိပ်မက်လှလှပေးတဲ့သူကတော့ နွဲ့နွဲ့တင်ပဲဖြစ်တယ်။ ဗမာသီချင်း အပုဒ် ၆၀၀ ကျော် ထဲမှာ နွဲ့နွဲ့တင်ကို ပတ်သက်တဲ့ အချစ်အကြောင်းတွေ အများကြီး တွေ့ရပါတယ်။ အထင်ရှား ဆုံးကတော့ “ သိပ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ နွဲ့တင်“ နဲ့ “ ဒို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်“ ပဲဖြစ်တယ်။ အဲဒါက လူရည်ချွန်ကို ရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က စခဲ့တာ။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝက စခဲ့တယ်။ ကိုးတန်းရောက်တော့ အတူတူ လူရည်ချွန်ဖြစ်ပြီး ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ အတူတူသွားခဲ့ရလို့ ပိုမို ရင်းနီးခဲ့တယ်။ ဆယ်တန်းရောက်တော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က နမ္မတူကို ပြန်သွားရတယ်။ သို့သော် ဆေးတက္ကသိုလ်တက်တော့ မန်းမြေမှာ ပြန်ဆုံခဲ့ကြတယ်။ ဆရာတူတပည့်ဘဝနဲ့အတူ ကျောင်းနေဘက်မှာ ခင်ခဲ့ကြတဲ့ ခင်မင်မှုဟာ အခြားကျောင်းသားတွေအကြားကို ရောက်သွား ရင် ပိုမိုပြီး အလေးအနက်ရှိလာတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် စိုင်းခမ်းလိတ်နဲ့ နွဲ့နွဲ့တင်တို့ရဲ့ ခင်မင်မှုဟာလည်း ရင်းနီးမှုကို ပိုပြီးတော့ ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားဘဝဆိုတာလဲ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းတုံးက ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့ အစစအရာရာ ထိမ်းသိမ်းမှုအောက်မှာ နေကြရတယ်။ တက္ကသိုလ်ရောက်လာ တဲ့အခါကျတော့ သိတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပြီလို့ သဘောထားတဲ့အတွက် ဆရာဆရာမတွေ မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်ရှုမှု မရှိတော့လို့ တချို့ကျောင်းသားတွေ အောက်ခြေလွတ်ပြီး တက္ကသိုလ်က ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာလို့ ဆိုကြတယ်။ အမှန်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ စာတွေလည်း များလာတယ်။ အဆင့်မြင့်လာတယ်။ ပေါ့ပေ့ါရော့ရော့နေ ပျော်ချင်သလိုပျော် နေတဲ့သူတွေအတွက် ပျက်စီးတတ်ကြတယ်။ များသောအားဖြင့် ယောကျာ်းလေးတွေပါ။
စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း ယောက်ျားသားပေမို့ ပျော်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် မိမိရဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ကိုတော့ အပျက်မခံခဲ့ပါဘူး။ သူကျောင်းပျက်လို့ အတန်းမတက်ခဲ့ရင် သူ့ကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူက နွဲ့နွဲ့တင်ပဲဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်တွေဟာ များသောအားဖြင့် နွဲ့နွဲ့တင်ရဲ့ လက်ရေးတွေသာများပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ခင်ရင်းနီးဖို့ ဆိုတာ (၁) ရှေးဘဝတုံးက မေတ္တာရေစက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ (၂) ဒီဘဝမှာ တစ်ယောက်ကို တစ် ယောက်ကူညီဖေးမခဲ့ကြတယ်။ ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ် ကြိုက်သွားကြတာပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ နှစ်ခုစလုံးကြောင့်ထင်တယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ် လည်း လူရည်ချွန်ကို ရအောင်ယူမယ် ဆိုတဲ့ သူ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ လူရည်ချွန်သုံးထပ်ကွမ်းဖြစ်တဲ့ နွဲ့နွဲ့တင်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက် ညားသွားကြတာကို တချို့အမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြ လေကန်ကြတယ်။ အများဆုံးအမေးခံရတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ စိုင်းခမ်းလိတ် ဘာကြောင့် ရှမ်းမကို မယူသလဲ တဲ့။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ရှမ်းမလေးများကို ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုံးက ရှမ်းမမ တွေက သူ့ကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အမြဲတမ်း ရှမ်းဘောင်းဘီဝတ်ပြီး တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တာကို တချို့ပျိုမေတွေက (တိုက်ဂေါ= တောဂိုက်)လို့တောင် ဆိုသေး တယ်။ တချို့လည်း ရှမ်းမျိုးချစ်ရူးလို့တောင် ဆိုသေးတယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သဘောကတော့ အပေးအယူသီချင်းထဲကလို မင်းလာမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခင်းပေးပါ့မယ် ဒါပေမယ့် ဒီလမ်းကို မင်းထာဝရလျှောက်ရမယ် . . . ပါ။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး ခင်းပေးတဲ့လမ်းပေါ် ထာဝရလျှောက် မယ့် နွဲ့နွဲ့တင်ကိုပဲ လက်ထပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် စိုင်းခမ်လိတ်တစ်ယောက် အတွေးတွေများစွာနဲ့ မိုးလင်းခဲ့ပေါင်း မနဲတော့ပါ။ နွဲ့နွဲ့တင်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ကိစ္စကို သူ့ရဲ့ သီချင်းဖြစ်တဲ့ `ဒို့နှစ် ယောက်ရဲ့အချစ်“သီချင်းကို ခံစားကြည့်ရင် နားလည်ကြမှာပါ။ သူနဲ့ မဆုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှမ်းမင်း သမီးများအတွက်လည်း ရှမ်းသီချင်းအချို့ စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်အချို့ကတော့ “ တစ်ညလုံး နိုးခဲ့သော်လည်း အိပ်ယာကမထဘဲနဲ့ မိုးလင်းတဲ့အခါ ငါ့ကို မှတ်မိရင်လည်း မခေါ်နဲ့တော့“ တဲ့။ နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ `လွယ်ဆမ်ဆစ်` သီချင်း ပါ။ အိမ်ထောင်ပြုပြီဆိုရင် အမျိုးသားက အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်ကို ဦးလည်မသုန် ထမ်းရွက်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတာဝန်ကို ကျေပြွန်အောင် ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ထမ်းဆောင်ခဲ့လို့ သူရေးတဲ့ `ဒီတောင်ကို မောင်ဖြိုပါ့မယ်`ဆိုတဲ့သီချင်းက ပေါ်လွင်စေခဲ့တယ်။
နောက်ပြီးတော့ သူများရဲ့ သမီးပျိုကို လက်ထပ်ယူပြီး မိမိရဲ့ ကြင်ယာအပေါ် ကတိ သစ္စာမရှိခဲ့ရင်၊ အိမ်ထောင်ရေးတာဝန် မကျေပြွန်ခဲ့ရင် `အလကားလူ` ဆိုပြီး အများရဲ့ ကဲ့ရဲ့မှုကို ခံရမယ်။ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်လဲ သူ့အချစ်ဟာ သူများထက်မလျှော့ကြောင်း `မန္တလေးရောက် ရှမ်းတစ်ယောက်`သီချင်းက `မန်းပျိုဖြူတစ်ယောက်ကို ရှမ်းချစ်လည်း ဗမာထက် မလျှော့တာ တကယ်တမ်းပြခဲ့တယ်`လို့ ဆိုထားတယ်လေ။
ဒါကတော့ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်တချို့ကို ဖေါ်ပြခြင်းပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဟာ မိမိတို့ရဲ့ အမျိုးအနွယ်ကို စောင့်ရှောက်ရမည့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ ရှမ်းလူငယ်များ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတာကို ရှေးရေစက်မို့လို့ ဆိုရမလား။ ဒါပေမယ့် အမျိုးအ နွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တော့ ဆရာကြီး ဦးစိုင်းအောင်ထွန်းရဲ့ စကားနဲ့ လက်ဆောင်ပါးပါရစေ။
“ငါတို့ ရှမ်းတွေဟာ တောတောင် သျှိုမြှောင် သစ်ပင်တွေအကြား၊ လယ်တော ယာတောတွေ အကြား အမျိုးအနွယ်ကို စောင့်ရှောက်ရင်း နေထိုင်လာခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ခဲ့ သော်လည်း ငါတို့အမျိုးအနွယ် မပျောက်ပျက်ခဲ့ဘူး။ ယနေ့တိုင် တည်ရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် နောင်အနာဂတ်မှာ တောတောင်သစ်ပင်တွေ လယ်ယာတွေ ပျောက်ပျက်ကုန်ပြီး ငါတို့တတွေ လူမျိုးခြားတွေရဲ့ အကြားမှာ နေထိုင်သွားကြရမယ်။ ဒါကြောင့် လူမျိုးခြားအကြားမှာ နေရမယ့်အချိန် ငါတို့အမျိုးအနွယ် မပျောက်ပျက်အောင် ဘယ်လို နေထိုင်သွားရမှာလဲ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာ မပျောက်ပျက်အောင် နည်းလမ်းသစ် ရှာရမှာပဲ“ တဲ့။
ရှမ်းပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စကားလည်း မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်။ အဲဒါက တော့ “ရှမ်းသားသမီးတိုင်း ရှမ်းမိခင်ဖခင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်၊ ရှမ်းဖိုးဖိုး ရှမ်းဖွားဖွား ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်“ တဲ့ ဒီစကားကတော့ မိမိတို့ရဲ့ သားမြေးတွေ ရှမ်းဖြစ်ရင် မိမိတို့ လည်း ရှမ်းဖေဖေ ရှမ်းမေမေ ရှမ်းဖိုးဖိုး ရှမ်းဖွားဖွားဖြစ်သွားမှာပါ။
ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်မှာ သူ့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်အဖြစ် ထွန်းကားခဲ့တာကတော့
(၁) နန်းခမ်းနွဲ့လိတ် ၁၉၇၄
(၂) နန်းခမ်းဥလိတ် ၁၉၇၉
(၃) နန်းခမ်းဟန်လိတ် ၁၉၈၃
(၄) စိုင်းခမ်းစိုးလိတ် ၁၉၈၇ တို့ဖြစ်တယ်။
လူဆိုတာ လောကဓံ အကောင်းအဆိုးကို မလွတ်နိုင်ပါ။ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်လည်း လောကဓံအမျိုးမျိုးကို ခံရသော်လည်း သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဦးတည်ချက်ကိုတော့ မပြောင်း လဲစေခဲ့ပါဘူး။ သူရေးသားခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ သဘာဝတရား နိယာမတရားတွေကို ပီပြင်စွာ ဖေါ်ညွှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် လူအများလက်ခံလာကြတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဖြစ်လို့ ပိုပြီး တန်ဖိုးထားကြတယ်။
လူဆိုတာက ချီးမွမ်းခြင်း ကဲ့ရဲ့ခြင်းအကြားကနေ အသက်ရှင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ခြင်းပါ။ တေးရေးဆရာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်လည်း မလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ ထဲမှာ အတွေးအခေါ်တွေ ကောင်းမွန်ပြီး သံစဉ်စာသားတွေ လေးနက်နုညက်ပေမယ့် ကဲ့ရဲ့ အပြစ်ရှာတဲ့သူတွေလည်း မရှားပါဘူး။ ရှမ်းစကားပုံတစ်ခုကတော့ “ အကဲ့ရဲ့လွတ်ရင် မိုးကြိုး ပစ်တတ်တယ်တဲ့“ ဒါကြောင့် ကဲ့ရဲ့တဲ့သူကြောင့် ဒို့တတွေ မိုးကြိုးအပြစ်မခံရလို့ သူတို့ကို တောင် ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေတယ်။
စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ အဝေဖန်ခံရဆုံး သီချင်းစာသားတစ်ပိုဒ်ကတော့ “ မောတော့ မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး“ဆိုတဲ့ဟာပါ။ (အကျယ်ကို ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆုရ စိုင်းထီးဆိုင်အကြောင်းမှာ ဖတ်ရှုပါရန်)
ကိုယ်တို့ချစ်တဲ့ဘီး၊ ဘီးနံပါတ် OK 0122L စတဲ့ စက်ဘီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေ ကတော့ ကာတွန်းတစ်ခုကို စာရေးသူဖတ်မိတယ်။ သူခိုးတစ်ယောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ဖွင့်တဲ့ သီချင်းကို နားထောင်မိပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံပါ။ သူခိုးနားပိတ်ပြီး ညီးညူနေတာကတော့ “သီချင်းရေးဆရာရဲ့စက်ဘီးကို မသိလို့ ခိုးမိခဲ့တာပါ. . . အခုတော သီချင်းနဲ့ လူကိုနှိပ်စက် နေပါလား“တဲ့။
၁၉၇၉ တုံးက ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်က မေမြို့ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျခဲ့တယ်။ အဲဒီတုံး က စာရေးသူ ၉ တန်းကျောင်းသားပါ။ ဦးစိုင်းခွန်လူ ဒေါ်နန်းခမ်းလုံတို့နဲ့ လိုက်သွားရပြီး လူကြီးတွေ ပြောတာကိုပဲ နားထောင်ခဲ့ရတယ်။ မေမြို့မိုး သီချင်းကိုရေးဖြစ်တဲ့အခွင့်ပါ။ ၁၉၇၈ တုံးကလည်း ဦးစိုင်းခွန်လူတို့နဲ့ အတူ မန္တလေး၊ စိန်ကျော်ကွေ့ရှိ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်တို့ အိမ်ကိုလည်း တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးသေး တယ်။ အဲဒီအချိန် နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်က ၄ နှစ်သမီး အရွယ်ပါ။
၁၉၈၃ ခုမှာတော့ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ ဆေးတက္ကသိုလ် ၂ မှာ M.Med.Sc (Anatomy)တက်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ မှာ M.Med.Sc (Anatomy) ဘွဲ့ကို ရခဲ့ပြန်တယ်။
၁၉၉၁ ခု မန္တလေးတက္ကသိုလ်များ ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှု ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ထမ်းဆောင် ရတယ်။ သူတို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေတ်အတွင်း နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ရှမ်းစာပေ အသုံးလုံးကို ရှမ်းရွာတွေမှာ သွားသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တယ်။ ရှမ်းစာပေ မူသစ် သန္ဓေတည်ခဲ့တာ ကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဆရာတော် ဦးဝိဇယနန္ဒ၊ စဝ်ဆိုင်မိန်း(ကျိုင်းတုံ)တို့ ကစတင် မျိုးစေ့ချခဲ့တာပါ။ ဆရာကြီး ဦးစိုင်းအောင်ထွန်းလက်ထက်မှာတော့ အဲဒီရှမ်းစာပေ မျိုးကို စတင်ပွားပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အဲဒီနောက် ဦးစိုင်းဖက ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပျဉ်းမနား၊ မြစ်ကြီးနား၊ လားရှိုး၊ တောင်ကြီးစတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကို ဦးဆောင်ပြီး ရှမ်းခေတ် သစ်စာပေများကို နေရာအနှံ့သင်ကြားပို့ချခဲ့တယ်။
ရှမ်းစာပေသင်တန်းမှာ သီဆိုဖို့ စာပေဆိုင်ရာသီချင်းများကိုလည်း ဒေါက်တာစိုင်းခမ်း လိတ်က ရေးသားပေးခဲ့ပြီး သင်တန်းဆရာများ ကျောင်းသားများအတွက် ပျော်ရွင်မှုကိုဖြစ် စေတဲ့အပြင် အားဆေးတစ်ခွက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ရှမ်းစာပေ သင်တန်းကျောင်းလည်း မရှိသလို၊ ရှမ်းဆရာဆရာမအတွက်လည်း လခဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အားလပ်တဲ့ နွေရာသီမှာ ရက်တိုသင်တန်းပဲဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ စာသင်တဲ့အချိန်ကလည်း ရွာသားတွေအဖို့ နေ့လည်ပိုင်း မအားတဲ့အတွက် ညပိုင်းမှသာ သင်တန်းဖွင့်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် စိုင်းခမ်းလိတ် ရဲ့ ရှမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ်က အဲဒီလိုဆိုထားတယ်။ ညအချိန်ဟာ အိပ်ဖို့ပဲလား. . . တဲ့။ ဆိုလိုတာ က ညဆိုတာ အိပ်ဖို့သက်သက်မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ရဲ့ စာပေများကို လေ့လာသင်ယူရမယ်။ မိသားစုအလိုက် သင်ပေးသွားရင်လည်း လွယ်ကူစွာနဲ့ ရေးတတ်ဖတ်တတ်သွားကြမှာပါ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ နယ်ဆင်းပြီး ရှမ်းစာ သင်ကြားမှု လျှော့ပါးလာတဲ့အချိန် သံဃာ တော်များက ရှမ်းဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုကို နှစ်စဉ် ပို့ချလျှက်ပါ။
၁၉၉၀ မှာတော့ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် ခန္ဓာဗေဒမှာ ကထိက အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်။ အရင်တုံးက ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ယခုတော့ ဆရာအဖြစ် တက္ကသိုလ်ကို ပြန်ရောက်လာခြင်းပါ။ ၁၉၉၂ ခု ၄၂ (စိန်ကျော်ကွေ့) လမ်းမှာရှိတဲ့ အိမ်ဟောင်းက နေ ၆၉ လမ်း ၄၁/၄၂ လမ်းကြားရှိ မိုင်ဆုံဂေဟာကိုပြောင်းရွှေ့လာတော့တယ်။
၁၉၉၃ ခု မန္တလေး တက္ကသိုလ်များ ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှု ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို မယူတော့ ဘဲ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ကိုတော့ ဆက်လက်ယူနေခဲ့တယ်။ ၁၉၉၅ ခုတော့ ကျန်း မာရေးအခြေအနေကြောင့် (ခါးရိုးနာ) ကထိကတာဝန်ကို အနားယူလိုက်တယ်။ ၁၉၉၅ ခုမှာတော့ မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ် ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေးခြင်းခံရ တယ်။ အရှင်ဓမ္မသာမိ (ကေလဏီယျတက္ကသိုလ်၊ ကိုလံဘို၊ သီရိလင်္ကာ)နဲ့ အရှင်သုခမိန္ဒ (နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်)တို့ကိုလည်း နာယကအဖြစ် ရွေးချယ်ထား တာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ၁၉၉၅ ခု ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ဦးဆောင်ပြီး တက္ကသိုလ်လူငယ် များ ကျန်းမာရွှင်လန်းစေဖို့၊ ခင်မင်ရင်းနီးစေဖို့ အတွက် မန္တလေးနဲ့ တောင်ကြီး ရှမ်းလူငယ် ဘောလုံး အသင်းကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အင်းလေးဖောင် တော်ဦး ဘုရားဖူးရင်း ဝက်သားကင်ကျောင်းကို ရောက်သွားတဲ့အချိန် ဘုရားရှိခိုးဆိုင်ရာ သီချင်းရေးဖို့ အတွေးသစ်တစ်ခုရလာခဲ့ကာ ၁၉၉၇ ခုတွင် စီးရီးတစ်ခွေစာအဖြစ် အကောင် အထည်ဖေါ်နိုင်ခဲ့တယ်။ စီးရီးခေါင်းစဉ်ကတော့ “ ဘုရားတရားသံဃာနဲ့ ဗုဒ္ဓဝင်အကျဉ်း“ဖြစ် ပြီး နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်ဆိုထားတာပါ။
၁၉၉၈ ခု သမီးဖြစ်သူ နန်းခမ်းဥလိတ်က ပြင်ဦးလွင် အထက (၂) (ယခင် စိန်အဲဘတ်) မှာ ဂုဏ်ထူး (၄) ဘာသာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် အဲဒီပညာရည် ချွန် ဆုပေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ သူ့သမီးအတွက် Let Your Light Shine သီချင်းရေးစပ် ပေးပြီး စိုင်းဆိုင်စွမ်ဖက ကီးဘုတ်တီး၊ နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်နဲ့ နန်းခမ်းဥလိတ်တို့က အဲဒီဂုဏ်ပြုပွဲ မှာ သီဆိုခဲ့ကြတယ်။
၁၉၉၉ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ နှစ် (၅၀)ပြည့် ရွှေရတုမွေးနေ့ ပွဲကို မန္တလေး တက္ကသိုလ်များ ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး မန္တလေးတက္က သိုလ်မှာ ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ ညပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုတော့ မန္တလေး ရှမ်းလူငယ်မောင်မယ်များက ရှမ်းသာရေးနာရေးအသင်းမှာ ကျင်းပပေးသွားခဲ့တယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံး ခရစ် ၂၀၀၀ ပြည့်ကို ကြိုဆိုတဲ့အချိန် တေးရေးဆရာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်း လိတ်က ရှမ်း၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ရေးစပ်ပြီး ကြိုဆိုခဲ့သေးတယ်။ အဲဒါကတော့
ꨡꨓ်လꨤမ်း ꨡꨓ်ပꨱꨓ် မိူꨓ်ꨀꨓ်ꨬလꨳ
မှန်းတာ ညီမျှခြင်း ဖြစ်တာ၊
အတ္တတွေး ဆုံးထိ လိုက်ရှာ၊
Where what seems is what has been;
A thought for oneself pursued,
Turns out for all living things.
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဒေါက်တာနွဲ့နွဲ့တင်က ကျိုင်းတုံဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျလို့ စိုင်းခမ်း လိတ်လည်း ကျိုင်းတုံကို အတူလိုက်သွားခဲ့တယ်။ သီချင်းရေးဆရာကတော့ ဘယ်မှာ ရောက် ရောက် ဘာကိုတွေ့တွေ့ ခံစားချက်နဲ့အညီ တေးတွေစီဖြစ်သွားတတ်ကြတာပဲ။ ကျိုင်းတုံ မှာတော့ (ကျိုင်းတုံစံအိမ်) ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာ ဒေါက်တာဓမ္မသာမိနဲ့ ကျိုင်းတုံမှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့ စကားမှတ်တမ်းတချို့က ဒီလိုပါ
(လိတ်) အခုလို အရှင်ဘုရားတို့ နိုင်ငံခြားမှာ စာတွေအောင်လာတာ တွေ့ရတော့ တပည့်တော် ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဘုရား။
(အရှင်) အခုလို ဘုန်းဘုန်းတို့ အောင်မြင်လာခဲ့တာကလည်း ဒကာကြီးတို့ အင်္ဂလိပ်စာတတ်တာကို အားကျလို့ ကြိုးစားပြီး အဲလိုဖြစ်လာတာပါ . . . တဲ့။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန် ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်အား ရှမ်းစာပေထူးချွန်ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ ကိုးမိုင်ရှမ်းကျောင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၉၅ ရှမ်းနှစ်သစ် ကူး အချိန်မှာ ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ။
၂၀၀၃ ခု သား စိုင်းခမ်းစိုးလိတ်က ဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူးခြောက်ဘာသာနဲ့ အောင်ပြီး မန္တလေးတိုင်းမှာ နံပါတ်တစ်၊ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးမှာ ဒုတိယရလို့ ရန်ကုန်၊ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ကျင်းပတဲ့ ဂုဏ်ပြုပွဲကို ဖခင်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် သွားတက်ရောက်ခဲ့တယ်။
၂၀၀၄ ခု မန္တလေး ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု နာယကဖြစ်ပြီး ယခုတိုင် တာဝန်ယူ လျက်ပါ။ ၂၀၀၇ ခု မန္တလေး ဂီတအစည်းအရုံးမှာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရတယ်။ ယခုတိုင် အဲဒီတာဝန်ကို ယူနေဆဲပါ။ ဒီ ၂၀၀၇ မှာပဲ ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ ဖိတ်လို့ လန်ဒန်ကို ရောက်သွားပြီး ရှမ်းယဉ်ကျေးမှု နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ စာတမ်းဖတ်ခဲ့တယ်။ အဆိုတော်စိုင်းထီး၊ နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်၊ ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်တို့လဲ လိုက်ပါသွားကြတယ်။ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးကိုလဲ အဲ ဒီမှာပဲ ဆင်နွဲခဲ့တယ်။
၂၀၀၈ ခု မေလ ၁၇ ရက် ပင်လုံမြို့၊ ပိဋကတ်ရှမ်းဘာသာပြန်အဖွဲ့ချုပ်၊ ပရိယတ္တိ သဒ္ဓမ္မပါလစာပွဲတော် နှစ် (၅၀) ပြည့် ရွှေရတုသဘင်မှာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်အား တေးရေးဆရာ ရှမ်းအနုပညာရှင်ထူးချွန်ဆု ကို ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်၊ တံဆိပ်နဲ့ ကျပ်ငွေဆယ်သိန်းပါ။ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ယခုလို ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆုရတာကို မြင်တွေ့ရလို့ ပရိသတ်တွေအားလုံး ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ကြရတယ်။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အတွက်နှစ်ရှည်လများ မနေမနား ကြိုးစားလာလို့ ဒီဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိတဲ့အတွက် ဆုယူချိန်မှာ လက်ခုပ်သံတွေဟာ မိုးထက်ညံသွားပါတော့တယ်။
ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ကိုယ်တိုင် ပင်လုံပရိယတ္တိသဒ္ဓမ္မပါလ နှစ် (၅၀) ရွှေရတုသဘင် ကို လာတွေ့ရတော့ များစွာ စိတ်စွမ်းအားတွေ တက်လာခဲ့ပြန်တယ်။ မိမိရဲ့ နောက်မှာ ပရိ သတ်တွေ အများကြီးရှိလို့ ပိုမိုအားရှိလာကြောင်းပါ။ အဲဒီပွဲတုံးက ဇနီးဒေါက်တာဒေါ်နွဲ့နွဲ့တင်၊ သမီးနန်းခမ်းနွဲ့လိတ်တို့လည်း လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ ရွှေရတုပွဲတော်အတွင်း ဒေါက်တာစိုင်း ခမ်းလိတ်က ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ခေတ်ရှမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ရေးဖွဲ့သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ (စွမ်းလန်စောဝ်ဖရား= ဘုရားရှင်ရဲ့ နောက်ကိုလိုက်မယ်) တဲ့။
မျိုးဆက်သစ် ရှမ်းအနုပညာရှင်များလည်း ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ကို ကြိုဆိုဂါရဝ ပြုကြတာတွေ့ရတယ်။ အားလုံးဟာ အနုပညာအင်အားတွေ ပိုမိုလန်းဆန်း အားပြည့်လာ သလို ခံစားနေကြရတယ်။ အနုပညာသမားဆိုတာ အားပေးသူရှိလေ အားပြည့်လေမဟုတ် လား။
ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ စာပေ သီချင်းများကတော့-
- ရှမ်းသီချင်း အပုဒ်ပေါင်း ၆၀၀ ခန့်
- မြန်မာသီချင်း အပုဒ်ပေါင်း ၆၀၀ ခန့်
- အင်္ဂလိပ်သီချင်း အပုဒ်ပေါင်း ၃၅ ခန့်
- ကဗျာပေါင်း အပုဒ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်
- ဘာသာပြန်ကဗျာ ၃၀၀ ခန့်
- ခုနစ်လုံးကဗျာ ၁ ပုဒ်
- ဘာသာပြန်ဝတ္ထု ၃ ပုဒ်
- ကိုယ်တိုင်ရေးဝတ္ထု ၁ ပုဒ်
- ဘာသာပြန်အဆိုအမိန့် ၂၀၀ ပုဒ်
စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်းကို သီဆိုသူ (ရှမ်း)
စိုင်းထီးဆိုင်၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ်၊ ဆခဟ၊ စိုင်းဆိုင်စွမ်ဖ၊ စိုင်းအောင်ထီးခမ်း၊ စိုင်းဆိုင်စွမ်မောဝ်၊ စိုင်းအိုက်ဆွန်၊ စိုင်းဖောင်း(န်)မောဝ်၊ နန်းမွေနွမ်ဖောင်၊ နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်၊ ပုစွန်၊ နန်းခမ်းခင်၊ နန်းခမ်းနောင့်၊ နန်းဆာရာ။
စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်းကို သီဆိုသူ (ဗမာ)
စိုင်းထီးဆိုင်၊ စိုင်းခမ်းသီ၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ်၊ စောသိမ်းဝင်း၊ စိုင်းဆေးနော်၊ ခင်မောင်တိုး၊ ကျော်ဟိန်း၊ ဆက်မော်၊ စိုးသူ၊ ရင်ဂို၊ မျိုးကျော့မြိုင်၊ ဆောင်းဦးလှိုင်၊ အဲလက်စ်၊ စည်သူလွှင်၊ ဘိုဖြူ၊ အက်စစ်၊ မောင်မောင်ဇော်လတ်၊ ဟန်ထူးလွင်၊ ကိုင်ဇာတင်မုန်း၊ မေဆွိ၊ အယ်လ်ခွန်းရီ၊ ကေဇင်လတ်၊ မီမီဝင်းဖေ၊ နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်၊ ရတနာဦး၊ ဆုန်သင်းပါရ်၊ နွေညီအစ်မများ။
အခု ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ မန္တလေး၊ မိုင်ဆုံဂေဟာမှာ ဇနီးသားသမီးတို့နဲ့ အတူ နေထိုင်ပြီး ဝါသနာအရ သီချင်းတွေ ရေးနေဆဲပါ။ ဇနီးဒေါက်တာဒေါ်နွဲ့နွဲ့တင်ကတော့ ကလေး အထူးကုဆေးရုံမှာ တာဝန်ထမ်းလာခဲ့ပြီး ဒီ ၂၀၁၀ မှာတော့ ပင်စင်ယူပြီး အပြင် ဆေး ခန်းမှာပဲ အလုပ်လုပ်တော့တယ်။ သမီးကြီး နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်ကတော့ B.E (Civil) ဘွဲ့ယူပြီး လန်ဒန်မှာ ကျောင်းသွားတက်နေဆဲပါ။ ( ) မှာ ( ) နဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တယ်။ နန်းခမ်းအုလိတ်ကတော့ M.B.B.S ဘွဲ့ရ၊ နန်းခမ်းဟန်လိတ်ကတော့ B.A (English) ဘွဲ့ရကာ ကိုကိုမောင်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျကာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်အတွက် မြေးနှစ်ယောက်ရစေသူပါ။ သားငယ် စိုင်းခမ်းစိုးလိတ်ကလည်း M.B.B.S ပါ။ သားသမီးများအားလုံးကို ဘွဲ့ရဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်ကောင်းဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်နဲ့ မိခင်ကောင်း ဒေါက်တာနွဲ့နွဲ့ တင်ကတော့ သားသမီးအတွက် ပညာအမွေပေးခဲ့လေပြီ။
ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆုရ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်တစ်ယောက် ဇနီး သားသမီး မြေးမြစ်တွေနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် တေးသီချင်းများ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းအပ်ပါတယ်။
(၁) စိုင်းအောင်မိန်း (မိုတိုင်း)ရေးတဲ့ “ရှမ်းအနုပညာရှင်ထူးချွန်ဆုရ ဒေါက်တာ စိုင်းခမ်လိတ်၏ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း“ ကို မှီငြမ်းသည်။
(၂) စာရေးသူ၏ ကိုယ်တွေ့
Get:Sao Su Kham